လိုးတတျလိုကျတာ ဦးမိုးရယျနှငျ့နှာဘူးမလေး မိဝငျးနှယျတို့ အလိုးခံပှဲ - Owl Myanmar News
လိုးတတျလိုကျတာ ဦးမိုးရယျနှငျ့နှာဘူးမလေး မိဝငျးနှယျတို့ အလိုးခံပှဲ
ဟဲ့ ဝငျးနှယျ..နငျ အသကျဘယျလောကျရှိပွီလဲ နနျးဝငျးဝငျးနှယျဆိုတဲ့ ကောငျမလေး မှနျရှမှေ့ာ သူ့ကိုယျလုံးကို လှညျ့ပတျပွီးကွညျ့နရောကနေ သူ့နောကျဖကျ ကုတငျစောငျးမှာ ခွတှေဲလောငျးခထြိုငျနသေော သူနဲ့မတိမျးမယိမျးကောငျမလေးကို လှညျ့၍ ကွညျ့သညျ။ ငါ ရှလေ့ထဲမှာ ဆယျ့ခွောကျနှဈပွညျ့မှာ..နငျရော မိသီ.. ငါက လှနျခဲ့တဲ့ခွောကျလလောကျထဲက ဆယျ့ခွောကျနှဈပွညျ့ခဲ့ပွီ.ငါက နငျ့ထကျ ကွီးတယျ. နငျက အသကျပဲကွီးမှာပေါ့.ကနျြတာတှေ ငါ့ကို မမှီပါဘူး
နနျးဝငျးဝငျးနှယျဆိုသော ကောငျမလေးက မိသီဆိုသော သီသီခိုငျဆိုသညျ့ ကောငျမလေးကို မခံခငျြအောငျစ၍ မှနျထဲမှ သူမပုံရိပျကို ကွညျ့လိုကျသညျ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ဘရာစီယာ အနကျရောငျလေးတဈထညျနှငျ့ စပျစမိုငျနာအနကျရောငျလေး တဈထညျသာရှိသညျ။ ရှမျးကပွားမို့ ဖွူဖှေးသော အသားအရညျနှငျ့ အနကျရောကျ ဘရာစီယာ နှငျ့ စပျစမိုငျနာတို့က လိုကျဖကျလှသညျသာမက အခြိုးအစားလှပဖှံ့ထှားသော နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ ကိုယျလုံးအလှက မိနျးမခငျြးပငျ စှဲမကျစရာ ဖွဈနသေညျ။ အံမယျ.နငျနဲ့ငါနဲ့ ဘာကှာလို့လဲ.နငျက အသားလှတျ အသားယူနတေယျ. မယုံရငျ နငျတိုငျးကွညျ့လေ.ဟငျး ဟငျး.ရှုံးတဲ့လူက နိုငျတဲ့လူခိုငျးတာ လုပျရမယျ. စိနျလိုကျ. သီသီခိုငျဆိုသော ကောငျမလေးက ကုတငျစောငျးတှငျ ထိုငျနရောကထလာပွီး မှနျရှတှေ့ငျ နနျးဝငျးဝငျးနှယျနှငျ့ ယှဉျပွီးရပျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သူမကိုယျပျေါမှ အဝတျအစားတှကေို ခြှတျသညျ။ နောကျဆုံး သီသီခိုငျ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ပနျးရောငျ ဘရာစီယာလေး တဈထညျနှငျ့ ပနျးရောငျ စပျစမိုငျနာလေး တဈထညျသာ ရှိတော့သညျ။
သီသီခိုငျမှာ နနျးဝငျးဝငျးနှယျလောကျ အသားမဖွူဘဲ အတနျငယျညိုသညျ။ ဒါပမေယျ့ အဝတျအစား အမွဲဝတျထားသောနရောမြားမှ အတှငျးသားလေးတှကေ ဝငျး၍နသေညျ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျက သီသီခိုငျကို တဈခကျြလှညျ့ကွညျ့လိုကျပွီး မှနျတငျခုံမှ အံဆှဲတဈခုကို ဆှဲဖှငျ့ကာ အထဲမှ အပျခြုပျဆိုငျမြားတှငျသုံးသညျ့ ပကွေိုးတဈခြောငျးကို ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ မိသီ.အကုနျလုံးခြှတျလိုကျဟာ.ပွီးမှတိုငျးမယျ ငါလညျး ခြှတျမယျ. ပွောပွောဆိုဆို နနျးဝငျးဝငျးနှယျက လကျထဲမှ ပကွေိုးခှလေေးကို မှနျတငျခုံပျေါတငျလိုကျပွီး သူမကိုယျပျေါမှ ဘရာစီယာနှငျ့ စပျစမိုငျနာတို့ကို ခြှတျလိုကျသညျ။ သီသီခိုငျလညျး လိုကျခြှတျသညျ။ နှဈယောကျစလုံး ကိုယျလုံးတီးဖွဈသှား ကွသောအခါ တဈယောကျကို တဈယောကျ ကွညျ့လိုကျကွသညျ။ ဝငျးနှယျ..နငျက သိပျခဈြဖို့ကောငျးတာပဲ.ဒါကွောငျ့ နငျ့ဘဲက နငျ့ကိုစှဲနတော မိသီကလညျးဟာ နငျရောလှတာပါပဲ.နငျ့ဘဲကလညျး နငျ့ကိုခဈြပါတယျ.လာ.ငါ တိုငျးပေးမယျ
သီသီခိုငျက ရှသေို့တိုးလိုကျတော့ နနျးဝငျးဝငျးနှယျက စောစောက မှနျတငျခုံပျေါမှာ တငျထားသော ပကွေိုးကို လှမျးယူလိုကျပွီး သီသီခိုငျ၏ ရငျ၊ ခါး၊ တငျ တို့ကို တိုငျးသညျ။ တိုငျးတာရငျး နနျးဝငျးဝငျးနှယျက ပွုံးယောငျသမျးလာသညျ။ မိသီ.နငျ ၃၀-၂၁-၃၂ ပဲရှိတယျ.နငျရှုံးမှာ ကွိမျးသနေပွေီ.ဟငျး.ဟငျး ပေး ငါ့ကို ပကွေိုး.နငျ့ကိုတိုငျးမယျ နနျးဝငျးဝငျးနှယျက သူမ၏လကျထဲမှ ပကွေိုးကို သီသီခိုငျ၏ လကျထဲသို့ ထညျ့လိုကျသညျ။ သီသီခိုငျက နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ ရငျ၊ ခါး၊ တငျတို့ကို တိုငျးတာသညျ။ ဟယျ.ဝငျးနှယျ..နငျ့ဟာက ကွညျ့တော့သာ ကဈြကဈြလဈလဈနဲ့ မသေးလှပါလား..ငါတော့ ရှုံးပွီ ဘယျလောကျရှိလို့လဲ. ၃၃-၂၂-၃၄ ရှိတယျ.နောကျပွီး နငျ့အသားလေးတှကေ တငျးနတောပဲဟယျ. ကဲမိသီ.နငျ ရှုံးပွီ..ငါခိုငျးတာလုပျတော့. အေးပါ.ဘာလုပျပေးရမလဲ ပွော. သီသီခိုငျက သူမလကျထဲမှ ပကွေိုးကိုလိပျ၍ မှနျတငျခုံပျေါတငျလိုကျပွီး ပွနျမေးသညျ။ ငါ့ကို နို့စို့ပေးဟာ. ဟယျ.ဝငျးနှယျကလညျး ကွံကွံဖနျဖနျဟာ.နငျနဲ့ငါနဲ့က မိနျးမခငျြးပဲဟာ.နငျ့ဘဲက စို့မပေးဘူးလား. ဟငျး.ဟငျး.ဒီကောငျတှကေို ဒီလောကျထိပေးလို့ ဘယျဖွဈအုံးမလဲ.အကုနျပေးလိုကျရငျ လိုခငျြတာယူပွီး ခှာထှကျသှားမှာပေါ့ဟ.အခုအကွငျီပျေါက ကိုငျတာပဲ ခံပွီး ဖီးလျယူနရေတာ သီသီခိုငျက နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ ဖှံ့ထှားသော နို့တှကေိုကွညျ့နရောမှ သူမ၏မကျြလုံးအကွညျ့မြားက နနျးဝငျးဝငျး နှယျ၏ ပေါငျကွားထဲသို့ ရောကျ၍ သှားသညျ။
ဝငျးနှယျ နငျကလညျး အမှေးသနျတယျနျော..ပွီးတော့ နငျ့ဟာကွီးက အဟနျ့လညျးကွီးတယျ.အားကစြရာ ကွီး. ငါတို့က မြိုးရိုးရှိတယျဟ.ငါ့အမဟောကွီးဆို ငါ့ထကျအမြားကွီး ကွီးတယျ.ဟဲ့ မိသီ.နငျ့ဟာလေးကတော့ သေးသေးလေး ပေါငျကွားထဲမှာညပျနတောပဲ.ပွီးတော့ အမှေးလေးတှကေလညျး ပလူမှေးပလူတောငျနဲ့ ကွဲလိုကျပါးလိုကျ တာ လှနျပါရော ကောငျမလေးနှဈယောကျ ကိုယျလုံးတီးနှငျ့ တဈယောကျခန်ဓာကိုယျမှ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှကေို တဈယောကျက ကွညျ့ရငျး သူမတို့ဘာသာ မသိလိုကျမှီမှာပငျ သူမတို့၏ အတှငျးစိတျမြားမှာ တမြိုးတမညျဖွဈလာကွသညျ။ တဈယောကျ၏ ခန်ဓာကိုယျအား တဈယောကျက နှဈသကျသဘောကလြာပွီး တဈဦး၏လကျကို တဈဦးက လှမျး၍ဆှဲလိုကျမိသညျ။ လာ.တို့ အိပျယာပျေါသှားကွရအောငျလား. ကုတငျပျေါသို့ နနျးဝငျးဝငျးနှယျက အရငျတကျ၍ ပကျလကျလှနျလှဲကာ တဈဖကျသို့တိုးပေးလိုကျစဉျ သီသီခိုငျက ကုတငျပျေါသို့ လှမျးတကျလိုကျသညျ။ သီသီခိုငျမှာ ကုတငျပျေါရောကျလြှငျ ပုဆဈတုတျ၍ထိုငျလိုကျပွီး နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ ကိုယျပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျသညျ။ ဗွုံးကနဲ ကောငျမလေးနှဈယောကျ တဈယောကျ မကျြလုံးကိုတဈယောကျစိုကျကွညျ့လိုကျ ကွပွီး မိသီက ဝငျးနှယျ၏ နှုတျခမျးလေးကို ငုံ့၍စုပျနမျးလိုကျသညျ။ ဝငျးနှယျ၏ လကျတဈဖကျက မိသီ၏ လညျပငျးကို သိုငျး ဖကျလိုကျပွီး သူမ၏ နှုတျခမျးနှဈလှာကွားသို့ ရောကျလာသော မိသီ၏ နှုတျခမျးလေးကို တပွှတျပွှတျပွနျစုပျနမျးပေးသညျ။
ဒီလိုပွနျ၍ နမျးပေးရငျး ဝငျးနှယျ၏လြှာက မိသီ၏ ပါးစပျထဲထိုးထညျ့လိုကျရုံမက လကျတဈဖကျကပါ နှဈကိုယျ ကွားသို့ ထိုးသှငျးလိုကျပွီး မိသီ၏ နို့တှကေို ကိုငျလိုကျရာ မိသီက သူမ၏ကိုယျကို အနညျးငယျကွှပေးလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ဝငျးနှယျလကျက မိသီ၏ နို့တှကေို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျဆုပျကိုငျပွီး ညှဈနယျပေးသညျ။ မိသီကလညျး အားကမြခံ ဝငျးနှယျ၏ ဖှံ့ထှား သော နို့နှဈလုံးကို လကျဖွငျ့အုပျ၍ကိုငျကာ ဆုပျခပြေေးသညျ။ ဆယျကြျောသကျ ကောငျမလေးနှဈယောကျစလုံး၏ အသား လေးမြားမှာ သူတို့၏မကျြနှာမှစ၍ တဈကိုယျလုံး တဖွေးဖွေးနီရဲလာသညျ။ ပွီးတော့ သူမတို့၏ အသကျရှုသံတှကေလညျး ပွငျးထနျလာသညျ။ ပါးစပျထဲတှငျ လြှာခငျြးကလိ၍ နှုတျခမျးကို အပွနျအလှနျစုပျနမျးနရောမှ မိသီက နှုတျခမျးအစုံကို ခှာပဈ လိုကျသညျ။ ပွှတျ. နှုတျခမျးခငျြးကှာသှားသညျနှငျ့ မိသီက ဝငျးနှယျ၏ မကျြနှာလေးကို စစေ့ငေုံ့၍ကွညျ့နစေဉျ ဝငျးနှယျကလညျး မှိတျထားသောမကျြလုံးအစုံကို ဖှငျ့၍ မကျြလုံးခငျြးဆိုငျကွညျ့လိုကျသညျ။
ငါ.နို့စို့တော့မယျ ဟာ. မိသီ၏အသံလေးက မော၍နသေညျ။ ဝငျးနှယျ ဘာမှပွနျမပွော ခေါငျးငွိမျ့ပွလိုကျသညျ။ မိသီက ဝငျးနှယျ ပကျ လကျလှနျနရောဘေးမှနေ၍ ဝငျးနှယျ၏ ကိုယျပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျသညျ။ မိသီက ကြှမျးသားပဲ. ငါ့ဘဲ လုပျတာ မှတျထားတာ ပွှတျ..အငျ့.. မိသီက စကားဆုံးသညျနှငျ့ ဝငျးနှယျ၏ နို့သီးခေါငျးလေးတဈခုကို ပွှတျကနဲ စုပျလိုကျသညျ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျ တှနျ့ ကနဲ ဖွဈသှားသညျ။ နို့သီးခေါငျးလေးကို တဈခကျြစုပျပွီးတော့ သီသီခိုငျက နို့အုံကို ပတျပတျလညျလိုကျ၍ စုပျနမျးပွီး နို့သီး ခေါငျးကို ပွနျ၍ငုံကာ အားရပါးရစို့တော့သညျ။ ထိုအခါ ဝငျးနှယျကလညျး ငုံ့ထား၍ တှဲလောငျးကနြသေော မိသီ၏ နို့တှကေို ကိုငျ၍ နို့သီးလေးတှကေို ခပြေေးလိုကျ၊ နို့အုံကို ဖဈြညှဈလိုကျနှငျ့ လုပျပေးသညျ။ ကောငျမလေးနှဈယောကျ မိနျးမခငျြးပလူးနကွေရငျး ကာမသှေးတှကေ တဖွေးဖွေးဆူပှကျ၍လာသညျ။ ပကျလကျ ဖွဈနသေော ဝငျးနှယျ၏ ပေါငျတံကွီးမြားက စုလိုကျကားလိုကျဖွဈနသေလို ဒူးထောကျ၍ ကုနျးကာ နို့စို့ပေးနသေော မိသီ၏ ဖငျကွီးကလညျး တရမျးရမျးဖွဈနသေညျ။
တဏှာရာဂပိုကွီးပုံရသော နနျးဝငျးဝငျးနှယျက မကွာမီမှာပငျ မကျြလုံးစုံမှိတျ၍ အရသာခံနရောမှ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ ဟဲ့ မိသီ.ငါ့ကို စောကျဖုတျယကျပေးပါလားဟာ.ပွီးရငျ ငါလညျး ပွနျယကျပေးမှာပေါ့. အသံလေးတှေ တုနျတုနျယငျယငျဖွငျ့ ဝငျးနှယျက သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို တဈလုံးပွီး တဈလုံးစို့နသေော မိသီကို ပွော လိုကျသညျ။ မိသီ နို့ကိုလှတျ၍ခေါငျးထောငျပွီး ဝငျးနှယျ၏ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးကို ကွညျ့လိုကျသညျ။ အတနျငယျကားထား သော ပေါငျတံကွီးမြား၏ ဂှဆုံမှ ဝငျးနှယျ၏ အမှေးထူထူဖွငျ့ စောကျဖုတျကွီးမှာ စောစောက သူမတှလေို့ကျရသညျထကျပို၍ သိသိသာသာကွီး ဖောငျးမို့နကွေောငျး သတိထားမိလိုကျသညျ။
သီသီခိုငျ ကုတငျပျေါမှ ဆငျးလိုကျသညျ။ ဝငျးနှယျ.နငျ ကုတငျကို ကနျ့လနျ့ဖွတျ အိပျလိုကျ. ဝငျးနှယျ သဘောပေါကျသှားသညျ။ သီသီခိုငျ ကုတငျအောကျကွမျးပွငျပျေါမှာ ဒူးထောကျထိုငျပွီး စောကျဖုတျ ယကျပေးတော့မညျဖွဈကွောငျး သိလိုကျပွီး သူမ၏ ခန်ဓာကိုယျကိုရှကေ့ာ ကုတငျပျေါတှငျ ကနျ့လနျ့ဖွတျအိပျ၍ ခွနှေဈ ခြောငျးကို ကုတငျစောငျးသို့ တှဲလောငျးခလြိုကျသညျ။ သီသီခိုငျက ဝငျးနှယျ၏ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဆှဲကားလိုကျပွီး သူမ၏ ပေါငျကွားသို့ဝငျ၍ ကုတငျဘေးကွမျးပွငျတှငျ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျသညျ။ ကုတငျမှာ ဆိုဖာကုတငျချေါ ကုတငျအနိမျ့စား ဖွဈ၍ သီသီခိုငျ၏ မကျြနှာနှငျ့ ဝငျးနှယျ၏ စောကျဖုတျတို့မှာ အံကိုကျအနအေထားဖွဈသှားသညျ။ အမှေးထူထူနှငျ့ ဝငျးနှယျ၏ စောကျဖုတျပျေါသို့ သီသီခိုငျက လကျဖဝါးလေးတငျ၍ ပှတျလိုကျသညျ။
အငျး..ဟငျး..နငျကလဲဟာ.. ဝငျးနှယျ တှနျ့ကနဲဖွဈသှားသညျ။ ပွီးတော့မှ သီသီခိုငျက စောကျဖုတျပျေါရှိ စောကျမှေးထူထူတို့ကို ဘေးနှငျ့ အထကျသို့ သပျ၍တငျလိုကျရာ နီညိုရောငျ စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေးက ထှကျပျေါ၍လာသညျ။ အကှဲကွောငျးထဲမှ ခေါငျးပွူ၍ ထိုးထိုးထောငျထောငျထှကျပျေါနသေော စောကျစလေ့ေးမှာ မွငျရရုံနှငျ့ အသဲယားစရာ ကောငျးလှသညျ။ သီသီခိုငျ လြှာကိုထုတျ၍ စောကျစလေ့ေးကို ယကျလိုကျသညျ။ အမေ့.အိုး..အိုး..အငျး.ဟငျး.. ဝငျးနှယျ၏ ဖငျကွီးတဈခုလုံး တုနျသှားပွီး ကော့တကျလာသညျ။ သီသီခိုငျမှာ စိတျတှဘေလောငျဆူ၍လာပွီး စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကို လကျမနှဈဖကျနှငျ့ အတနျငယျဖွဲလိုကျပွီး စောကျခေါငျးဝသို့ လြှာကို စုခြှနျ၍ ထိုးသှငျးကာ ပီပီပွငျပွငျယကျလတေော့သညျ။ အား.အငျး..အိုး..အား..အ.ဟငျး.ဟငျး.ဟုတျတယျ.ယကျ.ယကျ.အိုး..အိုး..အငျး.. အငျး.အ.အ.အငျး..
ပုဇှနျတောငျဈေးဖကျသို့ ခရီးသညျလိုကျပို့ရငျး ဝမေိုးမှာ အပွနျတှငျ နနျးရီဝငျးမြား အိမျတှငျရှိမလားဟူသော အတှေးဖွငျ့ သူ၏ ကားအုံနာလညျးဖွဈ၊ သူမကွာခဏ လိုးနရေသော နနျးရီဝငျးတို့ အိမျဖကျသို့ ကားကိုမောငျးလာခဲ့သညျ။ ခွံ ရှရေ့ောကျတော့ ခွံတံခါးလညျး ဖှငျ့ထားသညျ့အပွငျ အိမျရှတေံ့ခါးကွီးလညျးဖှငျ့ထားသညျကို မွငျလိုကျရသဖွငျ့ ကားကို လမျးဘေးသို့ခြ၍ ရပျလိုကျပွီး ဝမေိုး ခွံထဲသို့ ဝငျလာခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ အဆငျသငျ့ဖှငျ့ထားသော အိမျတံခါးမှ အထဲသို့ ဝငျလိုကျသညျ။ အိမျရှခေ့နျးတှငျ မညျသူ့ကိုမှ မတှရေ့ဘဲ တဈအိမျလုံးတိတျဆိတျ၍ နသေညျ။ ဝမေိုး ပွုံးလိုကျသညျ။ တဈခါ တဈရံ သညျလိုပငျ မမနနျးက သူ့ကားအိမျရှသေို့ရပျလိုကျသညျနှငျ့ သူမက အိပျခနျးထဲသို့ ပွေးဝငျသှားပွီး အဝတျအစားတှေ ခြှတျကာ ဝတျလဈစလဈနှငျ့ ကုတငျပျေါတှငျ လှဲ၍ အလိုးခံရနျ စောငျ့နတေတျလသေညျ။ ဝမေိုး အတှငျးဖကျရှိ အိပျခနျးရှိရာသို့ တဖွေးဖွေး လြှောကျလာခဲ့သညျ။ မမနနျး၏ အိပျခနျးက ပိတျထားပွီး သူမ၏ သမီး နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ အိပျခနျးက ပှငျ့၍ နသေညျ။ ဝမေိုး ဘာမှမစဉျးစားတော့ဘဲ ပှငျ့နသေော အိပျခနျးဝသို့ လြှောကျလာ ခဲ့သညျ။
ဟငျ. ဝမေိုး ကိုယျရှိနျသပျလိုကျပွီး တံခါးပေါကျဘေးသို့ အသာပွေးကပျလိုကျရသညျ။ အိပျခနျးထဲတှငျ နနျးဝငျးဝငျးနှယျ နှငျ့ သူမ၏ သူငယျခငျြး သီသီခိုငျဆိုသော ကောငျမလေးတို့ နှဈယောကျစလုံး ဝတျလဈစလဈဖွငျ့ ပလူးနကွေသညျ။ ကောငျ မလေးနှဈယောကျစလုံးကို သူရငျးရငျးနှီးနှီး သိသလို ကောငျမလေးတှကေလညျး သူ့ကို ရငျးရငျးနှီးနှီး သိလသေညျ။ တံခါး ပေါကျဘေးမှာ ရပျ၍ မကျြနှာတဈခွမျးထုတျ၍ အထဲသို့ ကွညျ့နမေိလသေညျ။ အိုး.ဟငျ့.ဟငျ့..မိသီရယျ.အားပါးရှီးကောငျးလိုကျတာ..ကောငျးလိုကျတာ..နာနာဖိယကျစမျးပါ. .အမလေး.လေး.အားပါးရှီး. သီသီခိုငျက ဝငျးနှယျ၏ စောကျဖုတျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကကြနြနဆှဲဖွဲပွီး လြှာနဲ့ ပွှတျကနဲ ပွှတျကနဲ မွညျအောငျ ကို အားရပါးရ ကုနျးကုနျးယကျပေးနသေညျ။ လြှာကို အပွားလိုကျကပျပွီး ကကြနြန ယကျပေးနတောဖွဈသညျ။
အား.ဟား.ဟား.ဟုတျပီပငျ့ပငျ့ပွီး ယကျတငျပေးလေ.အကှဲကွောငျးမှာခညျြး ယကျမနနေဲ့.နှုတျခမျး သားတှကေို ယကျပေး.အစကေို့လညျး ခနျြမထားနဲ့လေ.အားဟုတျပီ..အမလေး.လေး.ခံရတာ ထိလိုကျတာ.. တကယျပဲ.အိုး.အိုး.အား.ထိုးထညျ့လေ.အပေါကျကို လြှာထိုးသှငျးပါတော့လား.အ.အီး.အိုး.အိုးဟငျး ဟငျး.. ဝငျးနှယျတဈယောကျ ကော့လနျပွနျပွီး ရမကျပွငျးပွငျး အာသာငမျးငမျးဖွဈနသေညျ။ ပေါငျကွီးတှကေို ဆှဲထောငျလိုကျ ဝငျးနှယျ. နနျးဝငျးဝငျးနှယျက ကုတငျစောငျးတှငျ တှဲလောငျးခထြားသော ပေါငျနှဈဖကျကို ဆှဲတငျ မယူလိုကျပွီး ဒူးနှဈဖကျ ကိုကှေးကာ ပေါငျနှဈလုံးကို ထောငျ၍ကားလိုကျပွီး ခွဖေနောငျ့လေးနှငျ့ ကုတငျစောငျးအစပျလေးကို နငျးထားလိုကျသညျ။ သီသီခိုငျ၏ ပါးစပျက ရှသေို့တိုးကပျလိုကျပွီး ရမကျတှပွေငျးထနျမှုကွောငျ့ အတျောထောငျတကျနသေော ဝငျးနှယျ၏ စောကျ စလေ့ေးကို နှုတျခမျးနှဈခုနှငျ့ ညှပျ၍ စုပျလိုကျသညျ။
အ.အ.ရှီး.အိုး.အား..ငါ.ပွီး.ပွီးတော့မယျ.စုပျ.စုပျ.အား.အား.အိုး.အား.ရှီး.အား .အား. ဝငျးနှယျ၏ ခါးအောကျပိုငျးတဈခုလုံး ယမျးခါ၍ ပွီးသှားသညျ။ ဝငျးနှယျ ငွိမျကသြှားသညျအထိ သီသီခိုငျက စောကျ စလေ့ေးကို ဆကျ၍ မွှငျးမွှငျးလေးစုပျပေးနပွေီးမှ သူမ၏ ပါးစပျကိုခှာ၍ မတျတတျထ၍ ရပျလိုကျသညျ။ ကောငျးလိုကျတာ မိသီရယျ.လာ.နငျ့ကို ငါ တလှညျ့ ယကျပေးမယျ ဝငျးနှယျက ပွောပွီးထထိုငျကာ ကုတငျပျေါမှဆငျး၍ မတျတတျရပျလိုကျပွီး သီသီခိုငျနှငျ့ နရောခငျြး လဲရနျပွငျ လိုကျသညျ။ ဟငျ.ဟို.ဟိုမှာ. ဝငျးနှယျ မကျြလုံးပွူး မကျြဆံပွူးနှငျ့ တံခါးပေါကျဖကျ လကျညှိုးထိုးပွီး ကွောကျအားလနျ့အားပွောသညျ။ သီသီခိုငျ တံခါးပေါကျဖကျသို့ လှညျ့ကွညျ့သညျ။
ဟငျ. ဝုနျးဂြိုငျး. တံခါးဝတှငျ မားမားကွီးရပျနသေော ဝမေိုးကို တှလေို့ကျရပွီး သီသီခိုငျမှာ လကျမွနျခွမွေနျဖွငျ့ အိပျခနျးတံခါးပေါကျ ကို ပွေးပိတျလိုကျလသေညျ။ အိပျခနျးတံခါး ဝုနျးကနဲပိတျသှားသညျနှငျ့ ဝမေိုးမှာ ခေါငျးကိုသှငျသှငျခါယမျးလိုကျပွီး ထောငျထနသေော သူ့လီး ကွီးကို ပုဆိုးပျေါမှအုပျကိုငျကာ ခဏကွာအောငျ ပှတျသပျလိုကျပွီးတော့မှ အိမျထဲမှ ပွနျထှကျကာ ကားပျေါတကျ၍ မောငျး ထှကျခဲ့လသေညျ။ ကောငျမလေးနှဈယောကျကတော့ တဈယောကျတလှညျ့ဆကျပွီး ပလူးနကွေမှာ သခြောသညျ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျမှာ သူမ၏ မိခငျ နနျးရီဝငျးထကျပငျ ပို၍နှာထနျသေးကွောငျး ဝမေိုး မကျြမွငျကိုယျတှေ့ မွငျလာခဲ့ရ သညျ။ လှတာ၊ ခြောတာ၊ စှဲမကျစရာကောငျးတာကလညျး သူ့အမေ နနျးရီဝငျးထကျ အမြားကွီး သာလသေညျ။ ဝငျးနှယျ၏ ပုံရိပျက ဝမေိုး၏ အာရုံထဲက မထှကျခြေ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျမှာ ဝတျလဈစလဈဖွငျ့ ကုတငျစောငျးတှငျ ကုတငျပျေါကနျ့လနျ့ ဖွတျကာ ပကျလကျလှနျလှဲနသေဖွငျ့ သူမ၏ ရငျသားစိုငျတှကေ အထငျးသားဖွဈနသေညျ။ နို့တှကေ အိကြ၍မနဘေဲ မို့ဝငျး တငျးရငျး၍နသေညျ။ မို့မို့လုံးလုံးလေးတှဖွေဈနသေညျ။
ဝငျးနှယျမှာ ရမကျတှထေနျပွီး တဈကိုယျလုံး ကော့ပြံကာဖွဈနသေောကွောငျ့ သူမ၏ ရငျသားစိုငျနှဈခုက တသိမျ့ သိမျ့တုနျပွီးနသေညျ။ နို့သီးခေါငျးလေး နှဈခုကလညျး ကော့ထောငျစူကွှ၍နသေညျ။ သူမ၏ နို့သီးခေါငျးမှာ သာမနျမိနျးမတှေ ထကျပိုပွီး ရှညျကာ ထိပျဖြားလေးတှကေ ခြှနျ၍နသေညျ။ ဝမျးဗိုကျသားက ရှပျရှပျလေး၊ ဆီးစပျက မို့မောကျနပွေီး စောကျမှေး တှကေ ထူလှသနျလှသညျ။ ဖငျကွီးက ဖှေးကာအိနပွေီး ပေါငျတံတုတျတုတျကွီးတှကေ ဖွူဖှေး၍နသေညျ။ ဝမေိုးမှာ ဝငျးနှယျ ကို ပွနျ၍မွငျယောငျရငျး သကျပွငျးအခါခါခနြမေိသညျ။ သူနစေ့ဉျ ဝငျထှကျနသေောအိမျမို့ နနျးဝငျးဝငျးနှယျနှငျ့ နီးစပျဖို့မှာ သိပျပွီးမခကျလှပေ။ ဒါပမေယျ့ သူမ၏မိခငျ နနျးရီဝငျး မသိအောငျတော့ လုပျဖို့လိုသညျ။ ဒါဆိုရငျ မအရေော၊ သမီးပါ ရရှေညျ စားရတော့မညျဟု ဝမေိုး တှေးမိလိုကျလသေညျ။ ဝမေိုးက ကားကို ပုဇှနျတောငျဈေးရှတှေ့ငျ အမွဲတမျးဂိတျထိုးထားတတျလသေညျ။ ယခုလညျး ဝမေိုးမှာ ကားကို ဂိတျထိုးထားပွီး ခရီးသညျကိုစောငျ့ရငျး သတငျးစာကို ဖတျ၍နသေညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ မှေးပြံ့သောရနံ့ကို ရှုရှိုကျမိလိုကျသဖွငျ့ ဝမေိုးမှာ သတငျးစာမှ မကျြနှာကိုခှာလိုကျသညျ။ ထိုအခိုကျမှာပငျ ကားဘေးတှငျကပျ၍ရပျနသေော မိနျးကလေးတဈယောကျ ၏ ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ခွထေောကျအစုံကို တှမွေ့ငျလိုကျရသညျ။ ဝမေိုး ကောငျမလေး၏ မကျြနှာကိုမော့၍ကွညျ့လိုကျရာ သူ့ကို စိုကျကွညျ့နသေော မကျြလုံးတဈစုံနှငျ့ ရငျဆိုငျမိလိုကျသညျ။
ဟငျ..ဝငျးနှယျ ဝမေိုး ရငျထဲ ဒိတျကနဲခုနျသှားသညျ။ ဝမေိုး အံ့အားသငျ့သှားသညျကို ကွညျ့ပွီး နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ မကျြနှာလေးပွုံးယောငျသမျးသှားသညျ။ ဦးမိုး.သမီးကို အိမျလိုကျပို့ပေးပါလား အငျး.တကျ ဝငျးနှယျ ခေါငျးကိုပတျ၍လြှောကျသှားပွီး ကားခေါငျးခနျးတံခါးကိုဖှငျ့၍ ဝမေိုးနှငျ့ယှဉျထိုငျလိုကျသညျ။ ကားကို သာ ဂရုစိုကျပွီး မောငျးလာရပမေယျ့ ဝမေိုး ရငျတှကေ တဒိတျဒိတျခုနျနသေလို သူ့အကွညျ့တှကေလညျး သူ၏ဘေးတှငျ ယှဉျထိုငျနသေော ဝငျးနှယျထံသို့ ရောကျ ရောကျသှားရသညျ။ ဝငျးနှယျဝတျထားသော စကပျတိုတိုလေးက ပေါငျလညျ လောကျသာရှိ၍ ဖွူဖှေးဝငျးအိနသေော ပေါငျတံတုတျတုတျကွီးတှကေ စှဲမကျစရာကောငျးအောငျ ပျေါလှငျ၍နသေညျ။ ဝငျးနှယျမှာ နှုတျခမျးလေးကို တငျးတငျးလေးစေ့၍ စူးရှဝိုငျးစကျသော သူမ၏ မကျြလုံးအစုံက ရှတေူ့ရှုသို့ကွညျ့နသေညျ။ ဝငျးနှယျ၏ ပုံစံမှာ တဈစုံတဈခုကို လေးလေးနကျနကျစဉျးစားနပေုံရသညျ။
နနျးဝငျးဝငျးနှယျတို့အိမျမှာ အဘေီစီတှငျဆိုတော့ ကားက ခဏလေးမောငျးရသညျ။ ခွံရှရေ့ောကျတော့ ဝမေိုး ကား ကိုရပျလိုကျသညျ။ ဦးမိုး.အိမျထဲဝငျအုံး အသံပွတျနှငျ့ဆိုပမေယျ့ အမိနျ့ပေးသံမပေါကျ။ ဝငျးနှယျ၏ အသံလေးက နုနုလေး။ ဝမေိုးရငျထဲ တဒိနျးဒိနျးဖွဈသှား သညျ။ ကားထဲမှ ထှကျ၍ ဝငျးနှယျနောကျသို့ လိုကျလာခဲ့သညျ။ တငျးတငျးရငျးရငျးလေးဝတျထားသော စကပျလေးအတှငျးမှ တငျသားစိုငျကွီးတှကေ တအိအိတုနျခါ၍နသေညျ။ ဝမေိုး သကျပွငျးအခါခါခရြငျး ဝငျးနှယျ၏ နောကျဖကျမှ လိုကျလာကာ အိမျထဲသို့ ဝငျလာခဲ့သညျ။ ဦးမိုး ခဏထိုငျဦးနျော ဝမေိုးကို လှညျ့မကွညျ့ဘဲ ဝငျးနှယျကပွောကာ အိမျအတှငျးဖကျသို့ တောကျလြှောကျဝငျသှားသညျ။ ဝမေိုး အိမျရှေ့ ခနျးမှ ကုလားထိုငျတှငျ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျသညျ။ ငါးမိနဈလောကျနတေော့ ဝငျးနှယျ အိမျအတှငျးဖကျမှ ပွနျ၍ထှကျလာသညျ။ စောစောက အဝတျအစားနှငျ့ မဟုတျတော့ဘဲ ထဘီလေးတဈထညျကိုသာ ရငျလြားဝတျထားသညျ။ ဖွူဖွူဝငျးဝငျးအသား အရညျလေးနှငျ့ တဈတဈရဈရဈလှပသော ဝငျးနှယျကို လှမျးကွညျ့ရငျး ဝမေိုး ကွကျသေ သသှေားသညျ။ ဝငျးနှယျ သူထိုငျနေ သော နရောရှတှေ့ငျ ခွစေုံလာရပျသညျ။
ဦးမိုးကို သမီးတဈခုပွောမလို့ ဝငျးနှယျ၏ မကျြနှာလေးကို သူကွညျ့လိုကျသညျ။ ပွောလေ ဦးမိုး လူကွီးတဈယောကျဖွဈပွီး မတရားဘူး ဟငျ..ဦး.ဘာ. နေ.နအေုံး..သမီး စကားမဆုံးသေးဘူး ဝငျးနှယျက သူ့ကိုလကျကာပွီးပွောသညျ။ ပွီးတော့ စကားကိုဆကျ၍ မပွောဘဲ ခပျတှတှေလေေးရပျကာ ဝမေိုးကို စိုကျကွညျ့နသေညျ။ ဝငျးနှယျ ပွောရမှာ ခကျနပေုံရသညျ။ ပွောမထှကျပုံလညျးရသညျ။ ဦးကို အားမနာပါနဲ့ ပွောစရာရှိတာ ပွောပါ.. ဒီတော့မှ ဝငျးနှယျ သကျပွငျးတဈခကျြခလြိုကျပွီး ဆကျပွောသညျ။ ဦးမိုးကို သမီးမေးမယျ.အဲဒါကို အမှနျအတိုငျးဖွေ. အငျး. လူတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးထားတဲ့ပစ်စညျးတဈခုကို လူမမွငျအောငျသိမျးထားတာကို ခိုးပွီးကွညျ့တာ တရားပါ့မလား. .. ဘယျတရားပါ့မလဲ.ဒါက ဦး.. နအေုံး သမီးဆကျပွောအုံးမယျ.အဲဒီလို သူမြား ပစ်စညျးကို ပိုငျရှငျမသိအောငျခိုးကွညျ့ပွီး သူ့ပစ်စညျးကတြော့ လူမွငျမှာစိုးလို့ သိမျးဆညျးထားတယျဆိုရငျ အဲဒီလူ တရားပါ့မလား. ဘယျတရားပါ့မလဲ.
ဝငျးနှယျသူ့ကိုစိုကျကွညျ့နရေငျး ပါးခြိုငျ့လေးပျေါအောငျပွုံးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အိမျအတှငျးဖကျသို့ လှညျ့ထှကျရနျ ပွငျလိုကျသညျ။ ဦးမိုး မတရားဘူး ဟငျ. ဝငျးနှယျ အိမျအတှငျးဖကျသို့ ဝငျသှားခပြွေီ။ ဝမေိုး ခကျြခငျြးသဘောပေါကျလိုကျပမေယျ့ ခဏကွောငျနပွေီးမှ ဝငျးနှယျ၏နောကျသို့ ဝငျ၍လိုကျခဲ့လသေညျ။ ဝမေိုး အခနျးဝရောကျသောအခါ နနျးဝငျးဝငျးနှယျမှာ အိပျခနျးထဲရှိ ပွတငျး ပေါကျ တဈခုရှတှေ့ငျ အိမျခနျးထဲသို့ ကြောပေး၍ ရပျနသေညျ။ ဝမေိုး အိပျခနျးထဲသို့ ဖွေးညှငျးစှာလြှောကျဝငျလာပွီး ကုတငျ ဘေးတှငျရပျ၍ ဝငျးနှယျ၏နောကျကြောအလှကိုကွညျ့၍ ခံစားနမေိသညျ။ ဝငျးနှယျနှငျ့က တဈလံအကှာလောကျသာ ကှာခွား တော့သညျ။ ဝငျးနှယျ၏ အသကျရှုသံတှကေ ပွငျးထနျပွီး မွနျဆနျ၍နသေညျ။ အသကျပွငျးပွငျးရှုနသေောကွောငျ့ ရငျလြားထားသော ထဘီအတှငျးမှ မလုံတလုံ ရငျသားဆိုငျကွီးမြားမှာ ကွှတကျလာလိုကျ၊ နိမျ့ဆငျးသှားလိုကျနှငျ့ ဖွဈနသေညျ။
ဝမေိုး သူ၏ ရှပျအကငြ်္ီကိုခြှတျ၍ကုတငျတနျးပျေါတငျလိုကျသညျ။ ပွီးလြှငျ ပုဆိုးနှငျ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီတို့ကို ကှငျး လုံးခြှတျခလြိုကျရာ ဝငျးနှယျနှငျ့အတူ ကားပျေါတှငျရှိကတညျးက ကွိတျမနိုငျခဲမရဖွဈနသေော လီးတနျကွီးက ဖွောငျးကနဲ ထှကျ၍လာသညျ။ ဝမေိုး ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားပွီ။ အရှညျ (၇)လကျမနှငျ့ လုံးပတျ (၄)လကျမခှဲလောကျရှိသော သူ့လီးကွီး ကို လကျဖွငျ့ကိုငျကာ ဝငျးနှယျကို ကွညျ့လိုကျပွီး တဈကွိမျနှဈကွိမျလောကျ လီးကို လကျဖွငျ့ ဆုပျညှဈလိုကျပွီး ရှမှေ့ကုတငျ ပျေါသို့ ပကလြကလြှဲခလွိုကတြော့သညြ။ တပွိုငျနကျတညျးမှာလိုပငျ ဝငျးနှယျတဈယောကျ ကုတငျဘေးသို့ရောကျ၍လာ သညျ။ ထောငျမတျနသေော ဝမေိုး၏လီးကွီးကို မမှိတျမသုနျကွညျ့ရငျး သူမကိုယျပျေါမှ ရငျလြားထားသော ထဘီကို ကှငျးလုံး ခြှတျခလြိုကျသညျ။
ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားသော ဝငျးနှယျက သူမ၏လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဝမေိုး၏လီးတနျကွီးကို လှမျး၍ဆုပျကိုငျလိုကျပွီး ကုတငျစောငျးတှငျဝငျ၍ထိုငျလိုကျသညျ။ ပွီးလြှငျ ကနျြသောလကျတဈဖကျဖွငျ့ ဝမေိုး၏ ဂှေးအုကွီးမြားကို အရသာခံ၍ကိုငျ ကွညျ့သညျ။ ဝမေိုးက သူမ၏တငျသားကွီးတှကေို လှမျး၍ကိုငျလိုကျသညျ။ တငျသားကွီးမြားမှာ တငျး၍လုံးကဈြနသေညျ။ ပွီး တော့မှ ဝငျးနှယျက ဝမေိုး၏ဘေးသို့လှဲခလြိုကျရာ ဝမေိုးက သူမကိုဖကျ၍ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို စုပျနမျးလိုကျသညျ။ ဝငျးနှယျ က သူမ၏ပါးစပျလေးကို အသာလေး ဟပေးပွီး သူမ၏လြှာလေးကို ဝမေိုး၏ပါးစပျထဲသို့ ထိုးသှငျးပေးရာ ဝမေိုးမှာ ဝငျးနှယျ၏ လြှာလေးကို မကျမကျမောမောစုပျယူနမေိသညျ။ အိပျခနျးထဲရောကျမှ သူတို့နှဈယောကျမှာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ စကားမပွောဖွဈကွခြေ။
ဝငျးနှယျ၏ လကျတဈဖကျကတော့ လီးပျေါမှ မခှာပေ။ လီးကွီးကို ဆုပျကိုငျထားရငျး ပှတျသပျပေး နသေညျ။ ထိုနညျးတူပငျ ဝမေိုး၏လကျတဈဖကျကလညျး ဝငျးနှယျ၏ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးပျေါအုပျ၍ကိုငျကာ အမှေး ရှညျရှညျလေးမြားကို သပျ၍တငျပေးရငျး စောကျပတျနှုတျခမျးသားကွီးနှဈခုကို ပှတျ၍ပေးသညျ။ ထိုအခါ လကျဖဝါးထဲ၌ ခိုးလိုးခုလုဖွဈနသေော စောကျစလေ့ေးကို လောကျစာလုံး လုံးသလို လကျဖဝါးထဲထညျ့၍ လှိမျ့ပေးသညျ။ အို.ဟငျ့..ဟငျ့..ဦး..အငျ့..ဟငျ့..ဦး..ကမြနို့တှေ စို့ပေးစမျးပါလား.ဟငျ့.အငျ့..ဟငျး. ဝငျးနှယျပွောပွီးသညျနှငျ့ ဝမေိုးက ဝငျးနှယျ၏ နို့တဈဖကျကို ပါးစပျဖွငျ့ငုံလိုကျသညျ။ ပါးစပျထဲရောကျလာသော နို့သီးခေါငျးလေးကို လြှာနဲ့ထိုးဖိပှတျပေးရငျး နို့သီးခေါငျးအခွကေိုတော့ သှားနဲ့မနာအောငျ ကိုကျပေးသညျ။ သူ၏လှတျနေ သော လကျတဈဖကျက ဝငျးနှယျ၏ စောကျဖုတျကိုလှမျး၍ ကိုငျလိုကျပွနျသညျ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျက အလိုကျတသိပငျ သူမ၏ ပေါငျတနျကွီးမြားကို ကား၍ပေးသညျ။ လကျဖဝါးဖွငျ့ စောကျဖုတျကွီးကို ခပျဆတျဆတျရိုကျလိုကျတော့ ကောငျမလေး ကော့ ၍တကျလာသညျ။
ရမ်မကျစိတျကွောငျ့ စောကျဖုတျကွီးက ဖောငျးကားနတောဆိုတော့ လကျထဲမှာ စောကျဖုတျကွီးက တလုံးတခဲ အိအိထှေးထှေးကွီးဖွဈ၍နသေညျ။ အကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ ပှတျစမျးကွညျ့လိုကျတော့ စောကျရညျကွညျတှေ က ဝကျဝကျကှဲစိုရှဲ၍နသေညျ။ ဝမေိုး မကွုံဖူးလောကျအောငျပငျ စောကျရညျကွညျတှကေ မြားပွားစိုစှတျ၍နသေညျ။ ဝငျးနှယျတဈယောကျ အတျောဏှာထနျတာဘဲဟု တှေးမိလိုကျရုံမက သူမ၏ မိခငျထကျပငျ ပို၍ထနျကွောငျး သတိပွုမိလိုကျ သညျ။ ဝမေိုး နို့စို့ပေးနတောကို ရပျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ထထိုငျလိုကျလြှငျ ပကျလကျလေးဖွဈနသေော ဝငျးနှယျက သူမ၏ ပေါငျနှဈဖကျကို ဒူးကှေး၍ထောငျလိုကျပွီး ကားပေးလိုကျသညျ။ ဝမေိုးတကျလိုး၍ရအောငျ အဆငျသငျ့ပွငျပေးလိုကျခွငျးဖွဈ သညျ။ အသငျ့ပွငျပေးထားသော ဝငျးနှယျ၏ ကိုယျနဟေနျထားလေးမှာ ရမကျကွှစရာကောငျးလှနျးလှသညျ။ ဝမေိုး သူမ၏ ပေါငျဖှေးဖှေးကွီးနှဈလုံးကွားသို့ ဝငျလိုကျပွီး လီးကိုလကျနှငျ့ကိုငျ၍ စောကျပတျဝကိုမှနျး၍ လီးထိပျဖွငျ့တထေ့ောကျလိုကျ သညျ။
အို.အဟငျ့.ဦး. စောကျရညျကွညျမြား မတရားစိုရှဲနမှေုကွောငျ့ လီးထိပျက နှုတျခမျးသားကွီးနှဈခုကွားသို့ နှီးတပွားခနျ့ နဈဝငျသှား သညျ။ ထိုအခိုကျ ဝငျးနှယျကလညျး သူမ၏ ဖငျကွီးကို အလိုကျသငျ့ကော့တငျပေးခိုကျနှငျ့ အံကိုကျသှားပွီးအထဲသို့ လီးတနျ ကွီး တဝကျလောကျဝငျ၍ သှားလသေညျ။ ခြှဲကြိကြိအတှနေဲ့ တငျးကွပျကွပျအတှတေို့နှဈရပျပေါငျး၍ လီးတနျကွီးက ခံစား လိုကျရသညျ။ ဝမေိုးက ကနျြနသေောလီးတဝကျကို ထပျ၍ဖိသှငျးလိုကျသညျ။ ဗွဈ.ဗွဈ.ဖှတျ အား.ကြှတျ.ကြှတျ.ဖွေးဖွေးဦးရယျ..ဖွေးဖွေး..အား.အား. နနျးဝငျးဝငျးနှယျဆိုသော ကောငျမလေး၏ မကျြနှာလေး ရှုံ့မဲ့ပွီး ငွီးရှာသညျ။ ဝမေိုး၏ လီးရှညျရှညျတုတျတုတျကွီးက စောကျဖုတျထဲသို့ တဆုံးဝငျ၍သှားသညျ။ ဝငျသှားပွီ.အဟငျ့.ဝငျသှားပွီ သိပျနာနလေား သမီး ဟုတျတယျ ဦးရာ.တျောတျောနာတယျ.ဦးဟာကွီးက အရမျးကွီးတာကိုး. နာတယျဆိုရငျ လီးပွနျထုတျလိုကျမယျလေ အပိုတှေ လာပွောမနနေဲ့.အနာခံပွီးမှတော့ ပွနျမထုတျနဲ့တော့. ဒါဆိုရငျ ဆကျပွီးလိုးမယျနျော အငျး.လိုးလေ.သိပျတော့မကွမျးနဲ့နျော ဦး ဝမေိုးက စောကျဖုတျထဲကလီးကို ဆှဲထုတျလိုကျ ပွနျသှငျးလိုကျဖွငျ့ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျလေး လိုးပေးသညျ။ ကွီးမား တုတျခိုငျလှသညျ့ ဝမေိုး၏လီးနှငျ့ ကဉျြးကွပျလှသော ဝငျးနှယျ၏စောကျဖုတျတို့မှာ အံကသြှားစရေနျ အစပြိုး၍ ကငျြ့ယူနေ ခွငျးဖွဈလသေညျ။ ရမကျထနျသော နနျးဝငျးဝငျးနှယျကလညျး သူမ၏ စောကျဖုတျကွီးကို ကော့ ကော့တငျပေးသညျ။
ဝမေိုး က ကဉျြးကွပျလှသော ဝငျးနှယျ၏စောကျဖုတျမှာ သူ၏လီးကွီးနှငျ့ ကငျြ့သားရလာပွီဆိုသညျကို သတိထားမိလိုကျပွီး တဆငျ့ တကျ၍ခပျမှနျမှနျ တဈခကျြခငျြးဆောငျ့ ဆောငျ့လိုးပေးသညျ။ ဖှတျ.စှပျ.ဖှတျစှပျ.ဖှတျ အငျ့.ဟငျ့..ကောငျးတယျဦးရာ..ဆောငျ့.ဆောငျ့.လေ. ဖှတျ.ဖှတျ.ပွှတျ.ဗွဈဗွဈ.ဆောငျ့ဆောငျ့.ပိုပွီး ပွငျးပွငျး ဆောငျ့.အား.အား..ထှကျကုနျပွီ. အား.အား. အခကျြသုံးဆယျလောကျခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့လိုးပေးလိုကျသောအခါ နနျးဝငျးဝငျးနှယျသညျ ငါးဖယျပြံသလို ကော့ ကော့တကျပွီး ပွီး သှားသညျ။ ဝမေိုးက မပွီးသေးပေ။ ဆောငျ့တာရပျလိုကျပွီး လီးကို အဖုတျထဲဖိထညျ့ပွီး စိမျပေးထားလိုကျသညျ။ နနျးဝငျးဝငျးနှယျ၏ ကိုယျလုံးလေး ငွိမျကသြှားတော့မှ အဖုတျထဲမှ လီးကွီးအား ဝမေိုးက ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ ကဲ ဝငျးနှယျ..လေးဖကျထောကျပွီး ကုနျးပေးစမျးဟာ.နငျ့ ဖငျကွီးတှကွေညျ့ပွီး ငါလိုးခငျြလို့.. ဝမေိုး တမငျတဈတဈခှခှပွောလိုကျတာဖွဈသညျ။ ကွားလိုကျရသော ဝငျးနှယျမှာ ခကျြခငျြးစိတျတှလှေုပျရှား၍သှား သညျ။ ပွီးတော့ အိပျယာပျေါတှငျ ထထိုငျပွီး လေးဖကျထောကျ၍ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ဝမေိုးက သူမ၏နောကျတှငျ နရောယူ၍ သူမ၏ဖငျသားကွီးနှဈခွမျးကို ကကြနြနဖွဲကာ လီးကို စောကျပတျဝတှငျတပွေီ့း ဖိ၍ထိုးသှငျးသညျ။
အား.ကြှတျ..ကြှတျ.ရှီး. ဝငျးနှယျ ဆတျကနဲ တုနျသှားပွီး စုပျသပျ၍ ညီးလိုကျသညျ။ ဝမေိုးက သူမ၏ခါးသေးသေးလေးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ ညှပျကိုငျထားပွီး ဒဈမွုပျနပွေီဖွဈသော သူ၏လီးကွီးကို ဆကျပွီး လိုးသှငျးနသေညျ။ တအားဖိပွီး သှငျးတာမြိုးမဟုတျ။ တထဈခငျြး သှငျးနတောဖွဈသညျ။ အ.အမလေး.လေး.ဦးရယျ.အား ပါးပါး.ဟငျ့.ဝငျလာတယျ.ဦးရဲ့ လီးကွီး ကမြအဖုတျထဲကို.ဝငျ.. ဝငျ.တယျ.အား.အား..ဖွေး..ဖွေး မကွမျးပါနဲ့..ဖွေးဖွေး. နောကျဆုံး လီးက တဈခြောငျးလုံးဝငျ၍သှားသညျ။ ဝငျနသေော လီးကိုငွိမျထားပွီး ဝမေိုးက ဝငျးနှယျ၏ဖငျသားကွီး နှဈခုကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့အရသာခံ၍ကိုငျကာ ဆုပျနယျ၍ပေးသညျ။ ဝငျးနှယျ၏စိတျတှေ အတျောကွီး ထ၍လာသညျ။ လုပျတော့လေ ဦးရာ.လီးတဈခြောငျးလုံးဝငျနပွေီပဲဟာ.ဘာလုပျနတောလဲလို့.ဟငျ့..ဟငျ့.ဟငျ့. နနျးဝငျးဝငျးနှယျ လီးတဈလဈကွီးဝငျနသေော သူမ၏ဖငျကွီးကို လှုပျ၍ လှုပျ၍ လေးဖကျကုနျးနရောမှ ပွောရှာသညျ။ ဝမေိုးက သဘောကစြှာပွုံးလိုကျပွီး ဝငျးနှယျ၏ ဖငျသားကွီးနှဈဖကျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကကြနြနကိုငျပွီး လီးကွီးကို ဖွေး ဖွေးလေးသှငျးလိုကျထုတျလိုကျ လုပျသညျ။ တကယျ့မှ ဖွေးဖွေးလေးဖွဈသညျ။
ကဉျြးကွပျလှသောစောကျဖုတျထဲကို တုတျ ခိုငျကွီးမားလှတဲ့ လီးက ဝငျနတောဆိုတော့ ကွပျညပျနသေော စောကျဖုတျအတှငျးသား နှုတျခမျးသားမြားက လီးကွီး ဆှဲ ထုတျလိုကျတိုငျး စူ စူ၍ထှကျလာသညျ။ ဝမေိုး၏ လိုးဆောငျ့ခကျြတှကေ တဖွေးဖွေး သှကျသှကျလာသလို အားလညျးပွငျး လာသညျ။ စှပျ.ဖှတျ.ဖှတျ.ပွှတျ.ဗွဈဖှတျ.ဖှတျ. အား.ဟား..ဆောငျ့..ဆောငျ့..တအားဆောငျ့..အငျး.အား..အား.. ဝငျးနှယျ၏သှေးသားတှေ အရမျးပငျလှုပျရှား၍လာသညျ။ ပါးစပျက အငမျးမရပွောရငျး သူမ၏ဖငျဆုံကွီးကို ကော့ ကော့တငျပေးသညျ။ ဝငျးနှယျမှာ လေးဖကျထောကျလကျြပုံစံပငျမဟုတျတော့ဘဲ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကို အိပျယာပျေါတှငျ ပွားနအေောငျကပျပွီး ဝပျပေးထားကာ ဖငျပူးတောငျးထောငျ၍ အလိုးခံနသေညျ့အနအေထားသို့ ရောကျ၍နသေညျ။
ဖှတျ.ဖှတျ.စှပျ.စှပျ.ပွှတျ.အား.ပါး.အား.အား.အိုး.အိုး..အမလေး.လေး.ကြှတျ ကြှတျ..ကြှတျ. နနျးဝငျးဝငျးနှယျ ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ အရညျတှကေို ပနျးထုတျလိုကျသညျ။ ဝငျးနှယျ ပွီးသှားမှနျးသိပမေယျ့ ဝမေိုးက အလိုးအဆောငျ့မရပျတော့ပါ။ လှုပျရှားသှားသော သူမ၏ ဖငျကွီးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ထိနျးကိုငျကာ ဖိ၍ ဖိ၍ ဆောငျ့ကာလိုးသညျ။ ဖှတျ.ဖှတျ.ပွှတျ..ပွှတျ.စှပျ.ဖှတျ.ဗွဈ.ဗွဈ.ဖှတျ.အားအအီးရှီးအအမလေး.အိုး. အိုး. ပွီးသှားပွီးနောကျ ကြိနျးစပျနသေော စောကျခေါငျးထဲသို့ ခပျထှားထှားတုတျတုတျကွီးက အားရပါးရဆကျပွီး ဆောငျ့ လိုးနသေညျဖွဈ၍ ဝငျးနှယျမှာ စောကျဖုတျထဲတှငျ ကြိနျးစပျပွီး နာလှသညျ။ ဒါပမေယျ့ အခကျြ(၂၀)လောကျဆကျပွီး ဆောငျ့ ပွီးခြိနျတှငျတော့ အရသာကောငျး၍လာပွီး သူမ၏သှေးသားမြားပွနျ၍ ဆူပှကျလာသညျ။ ဖှတျ.ဖှတျ.စှပျ.စှပျ.ပွှတျ.အီး.ဆောငျ့.ဦး.သမီး ကောငျးလာပွီ မညှာနဲ့.ဆောငျ့.ဆောငျ့.အိုး ..အိုး. တဖွေးဖွေးကောငျးလာသော ဝငျးနှယျမှာ ပွီးလုပွီးခငျြဖွဈလာသလို ပွီးခငျြလာသော ဝမေိုးကလညျး ဒလစပျဆောငျ့ သညျ။ ဝငျးနှယျပွောပွီး အခကျြ(၂၀)လောကျ ဆောငျ့ပွီးခြိနျတှငျတော့ ဝမေိုး၏ လရညျမြားမှာ တပုံတပငျကွီး အရှိနျပွငျးပွငျး ဖွငျ့ ပနျးထှကျသှားရာ ပူပူနှေးနှေးသုတျရညျမြား သားအိမျထဲသို့ အရှိနျပွငျးစှာကရြောကျခိုကျ နနျးဝငျးဝငျးနှယျမှာလညျး ဖငျကွီးရမျးခါ၍ ပွီး သှားတော့သညျ။ ဖှတျ.ပွှတျ.စှပျ.ဖှတျ..ဗွဈ.ပွှတျ.ဗွဈ.ဖှတျဗွဈအိုး.ဦး.အား.အား.ထှကျ.ထှကျပွီ. အား.အမလေး..ကောငျးလိုကျတာရှငျအ..အမလေး..ဘယျလို ကောငျးမှနျးကို မသိတော့ပါဘူး..အား အား. ပွီးပါပွီ။
လိုးတတ်လိုက်တာ ဦးမိုးရယ်နှင့်နှာဘူးမလေး မိဝင်းနွယ်တို့ အလိုးခံပွဲ
ဟဲ့ ဝင်းနွယ်..နင် အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး မှန်ရှေ့မှာ သူ့ကိုယ်လုံးကို လှည့်ပတ်ပြီးကြည့်နေရာကနေ သူ့နောက်ဖက် ကုတင်စောင်းမှာ ခြေတွဲလောင်းချထိုင်နေသော သူနဲ့မတိမ်းမယိမ်းကောင်မလေးကို လှည့်၍ ကြည့်သည်။ ငါ ရှေ့လထဲမှာ ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်မှာ..နင်ရော မိသီ.. ငါက လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ထဲက ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ.ငါက နင့်ထက် ကြီးတယ်. နင်က အသက်ပဲကြီးမှာပေါ့.ကျန်တာတွေ ငါ့ကို မမှီပါဘူး
နန်းဝင်းဝင်းနွယ်ဆိုသော ကောင်မလေးက မိသီဆိုသော သီသီခိုင်ဆိုသည့် ကောင်မလေးကို မခံချင်အောင်စ၍ မှန်ထဲမှ သူမပုံရိပ်ကို ကြည့်လိုက်သည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ဘရာစီယာ အနက်ရောင်လေးတစ်ထည်နှင့် စပ်စမိုင်နာအနက်ရောင်လေး တစ်ထည်သာရှိသည်။ ရှမ်းကပြားမို့ ဖြူဖွေးသော အသားအရည်နှင့် အနက်ရောက် ဘရာစီယာ နှင့် စပ်စမိုင်နာတို့က လိုက်ဖက်လှသည်သာမက အချိုးအစားလှပဖွံ့ထွားသော နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်လုံးအလှက မိန်းမချင်းပင် စွဲမက်စရာ ဖြစ်နေသည်။ အံမယ်.နင်နဲ့ငါနဲ့ ဘာကွာလို့လဲ.နင်က အသားလွတ် အသားယူနေတယ်. မယုံရင် နင်တိုင်းကြည့်လေ.ဟင်း ဟင်း.ရှုံးတဲ့လူက နိုင်တဲ့လူခိုင်းတာ လုပ်ရမယ်. စိန်လိုက်. သီသီခိုင်ဆိုသော ကောင်မလေးက ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်နေရာကထလာပြီး မှန်ရှေ့တွင် နန်းဝင်းဝင်းနွယ်နှင့် ယှဉ်ပြီးရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်သည်။ နောက်ဆုံး သီသီခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပန်းရောင် ဘရာစီယာလေး တစ်ထည်နှင့် ပန်းရောင် စပ်စမိုင်နာလေး တစ်ထည်သာ ရှိတော့သည်။
သီသီခိုင်မှာ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်လောက် အသားမဖြူဘဲ အတန်ငယ်ညိုသည်။ ဒါပေမယ့် အဝတ်အစား အမြဲဝတ်ထားသောနေရာများမှ အတွင်းသားလေးတွေက ဝင်း၍နေသည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က သီသီခိုင်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး မှန်တင်ခုံမှ အံဆွဲတစ်ခုကို ဆွဲဖွင့်ကာ အထဲမှ အပ်ချုပ်ဆိုင်များတွင်သုံးသည့် ပေကြိုးတစ်ချောင်းကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ မိသီ.အကုန်လုံးချွတ်လိုက်ဟာ.ပြီးမှတိုင်းမယ် ငါလည်း ချွတ်မယ်. ပြောပြောဆိုဆို နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က လက်ထဲမှ ပေကြိုးခွေလေးကို မှန်တင်ခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီး သူမကိုယ်ပေါ်မှ ဘရာစီယာနှင့် စပ်စမိုင်နာတို့ကို ချွတ်လိုက်သည်။ သီသီခိုင်လည်း လိုက်ချွတ်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွား ကြသောအခါ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်လိုက်ကြသည်။ ဝင်းနွယ်..နင်က သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ.ဒါကြောင့် နင့်ဘဲက နင့်ကိုစွဲနေတာ မိသီကလည်းဟာ နင်ရောလှတာပါပဲ.နင့်ဘဲကလည်း နင့်ကိုချစ်ပါတယ်.လာ.ငါ တိုင်းပေးမယ်
သီသီခိုင်က ရှေ့သို့တိုးလိုက်တော့ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က စောစောက မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ တင်ထားသော ပေကြိုးကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး သီသီခိုင်၏ ရင်၊ ခါး၊ တင် တို့ကို တိုင်းသည်။ တိုင်းတာရင်း နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က ပြုံးယောင်သမ်းလာသည်။ မိသီ.နင် ၃၀-၂၁-၃၂ ပဲရှိတယ်.နင်ရှုံးမှာ ကြိမ်းသေနေပြီ.ဟင်း.ဟင်း ပေး ငါ့ကို ပေကြိုး.နင့်ကိုတိုင်းမယ် နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က သူမ၏လက်ထဲမှ ပေကြိုးကို သီသီခိုင်၏ လက်ထဲသို့ ထည့်လိုက်သည်။ သီသီခိုင်က နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ရင်၊ ခါး၊ တင်တို့ကို တိုင်းတာသည်။ ဟယ်.ဝင်းနွယ်..နင့်ဟာက ကြည့်တော့သာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ မသေးလှပါလား..ငါတော့ ရှုံးပြီ ဘယ်လောက်ရှိလို့လဲ. ၃၃-၂၂-၃၄ ရှိတယ်.နောက်ပြီး နင့်အသားလေးတွေက တင်းနေတာပဲဟယ်. ကဲမိသီ.နင် ရှုံးပြီ..ငါခိုင်းတာလုပ်တော့. အေးပါ.ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ပြော. သီသီခိုင်က သူမလက်ထဲမှ ပေကြိုးကိုလိပ်၍ မှန်တင်ခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီး ပြန်မေးသည်။ ငါ့ကို နို့စို့ပေးဟာ. ဟယ်.ဝင်းနွယ်ကလည်း ကြံကြံဖန်ဖန်ဟာ.နင်နဲ့ငါနဲ့က မိန်းမချင်းပဲဟာ.နင့်ဘဲက စို့မပေးဘူးလား. ဟင်း.ဟင်း.ဒီကောင်တွေကို ဒီလောက်ထိပေးလို့ ဘယ်ဖြစ်အုံးမလဲ.အကုန်ပေးလိုက်ရင် လိုချင်တာယူပြီး ခွာထွက်သွားမှာပေါ့ဟ.အခုအကြင်ီပေါ်က ကိုင်တာပဲ ခံပြီး ဖီးလ်ယူနေရတာ သီသီခိုင်က နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ဖွံ့ထွားသော နို့တွေကိုကြည့်နေရာမှ သူမ၏မျက်လုံးအကြည့်များက နန်းဝင်းဝင်း နွယ်၏ ပေါင်ကြားထဲသို့ ရောက်၍ သွားသည်။
ဝင်းနွယ် နင်ကလည်း အမွှေးသန်တယ်နော်..ပြီးတော့ နင့်ဟာကြီးက အဟန့်လည်းကြီးတယ်.အားကျစရာ ကြီး. ငါတို့က မျိုးရိုးရှိတယ်ဟ.ငါ့အမေဟာကြီးဆို ငါ့ထက်အများကြီး ကြီးတယ်.ဟဲ့ မိသီ.နင့်ဟာလေးကတော့ သေးသေးလေး ပေါင်ကြားထဲမှာညပ်နေတာပဲ.ပြီးတော့ အမွှေးလေးတွေကလည်း ပလူမွှေးပလူတောင်နဲ့ ကြဲလိုက်ပါးလိုက် တာ လွန်ပါရော ကောင်မလေးနှစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီးနှင့် တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်မှ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို တစ်ယောက်က ကြည့်ရင်း သူမတို့ဘာသာ မသိလိုက်မှီမှာပင် သူမတို့၏ အတွင်းစိတ်များမှာ တမျိုးတမည်ဖြစ်လာကြသည်။ တစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်အား တစ်ယောက်က နှစ်သက်သဘောကျလာပြီး တစ်ဦး၏လက်ကို တစ်ဦးက လှမ်း၍ဆွဲလိုက်မိသည်။ လာ.တို့ အိပ်ယာပေါ်သွားကြရအောင်လား. ကုတင်ပေါ်သို့ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က အရင်တက်၍ ပက်လက်လှန်လှဲကာ တစ်ဖက်သို့တိုးပေးလိုက်စဉ် သီသီခိုင်က ကုတင်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်သည်။ သီသီခိုင်မှာ ကုတင်ပေါ်ရောက်လျှင် ပုဆစ်တုတ်၍ထိုင်လိုက်ပြီး နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်သည်။ ဗြုံးကနဲ ကောင်မလေးနှစ်ယောက် တစ်ယောက် မျက်လုံးကိုတစ်ယောက်စိုက်ကြည့်လိုက် ကြပြီး မိသီက ဝင်းနွယ်၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံ့၍စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဝင်းနွယ်၏ လက်တစ်ဖက်က မိသီ၏ လည်ပင်းကို သိုင်း ဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားသို့ ရောက်လာသော မိသီ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်ပြန်စုပ်နမ်းပေးသည်။
ဒီလိုပြန်၍ နမ်းပေးရင်း ဝင်းနွယ်၏လျှာက မိသီ၏ ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ရုံမက လက်တစ်ဖက်ကပါ နှစ်ကိုယ် ကြားသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး မိသီ၏ နို့တွေကို ကိုင်လိုက်ရာ မိသီက သူမ၏ကိုယ်ကို အနည်းငယ်ကြွပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဝင်းနွယ်လက်က မိသီ၏ နို့တွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ညှစ်နယ်ပေးသည်။ မိသီကလည်း အားကျမခံ ဝင်းနွယ်၏ ဖွံ့ထွား သော နို့နှစ်လုံးကို လက်ဖြင့်အုပ်၍ကိုင်ကာ ဆုပ်ချေပေးသည်။ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးနှစ်ယောက်စလုံး၏ အသား လေးများမှာ သူတို့၏မျက်နှာမှစ၍ တစ်ကိုယ်လုံး တဖြေးဖြေးနီရဲလာသည်။ ပြီးတော့ သူမတို့၏ အသက်ရှုသံတွေကလည်း ပြင်းထန်လာသည်။ ပါးစပ်ထဲတွင် လျှာချင်းကလိ၍ နှုတ်ခမ်းကို အပြန်အလှန်စုပ်နမ်းနေရာမှ မိသီက နှုတ်ခမ်းအစုံကို ခွာပစ် လိုက်သည်။ ပြွတ်. နှုတ်ခမ်းချင်းကွာသွားသည်နှင့် မိသီက ဝင်းနွယ်၏ မျက်နှာလေးကို စေ့စေ့ငုံ့၍ကြည့်နေစဉ် ဝင်းနွယ်ကလည်း မှိတ်ထားသောမျက်လုံးအစုံကို ဖွင့်၍ မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်။
ငါ.နို့စို့တော့မယ် ဟာ. မိသီ၏အသံလေးက မော၍နေသည်။ ဝင်းနွယ် ဘာမှပြန်မပြော ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ မိသီက ဝင်းနွယ် ပက် လက်လှန်နေရာဘေးမှနေ၍ ဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်သည်။ မိသီက ကျွမ်းသားပဲ. ငါ့ဘဲ လုပ်တာ မှတ်ထားတာ ပြွတ်..အင့်.. မိသီက စကားဆုံးသည်နှင့် ဝင်းနွယ်၏ နို့သီးခေါင်းလေးတစ်ခုကို ပြွတ်ကနဲ စုပ်လိုက်သည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ် တွန့် ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးကို တစ်ချက်စုပ်ပြီးတော့ သီသီခိုင်က နို့အုံကို ပတ်ပတ်လည်လိုက်၍ စုပ်နမ်းပြီး နို့သီး ခေါင်းကို ပြန်၍ငုံကာ အားရပါးရစို့တော့သည်။ ထိုအခါ ဝင်းနွယ်ကလည်း ငုံ့ထား၍ တွဲလောင်းကျနေသော မိသီ၏ နို့တွေကို ကိုင်၍ နို့သီးလေးတွေကို ချေပေးလိုက်၊ နို့အုံကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်နှင့် လုပ်ပေးသည်။ ကောင်မလေးနှစ်ယောက် မိန်းမချင်းပလူးနေကြရင်း ကာမသွေးတွေက တဖြေးဖြေးဆူပွက်၍လာသည်။ ပက်လက် ဖြစ်နေသော ဝင်းနွယ်၏ ပေါင်တံကြီးများက စုလိုက်ကားလိုက်ဖြစ်နေသလို ဒူးထောက်၍ ကုန်းကာ နို့စို့ပေးနေသော မိသီ၏ ဖင်ကြီးကလည်း တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်။
တဏှာရာဂပိုကြီးပုံရသော နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က မကြာမီမှာပင် မျက်လုံးစုံမှိတ်၍ အရသာခံနေရာမှ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ ဟဲ့ မိသီ.ငါ့ကို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးပါလားဟာ.ပြီးရင် ငါလည်း ပြန်ယက်ပေးမှာပေါ့. အသံလေးတွေ တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြင့် ဝင်းနွယ်က သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးစို့နေသော မိသီကို ပြော လိုက်သည်။ မိသီ နို့ကိုလွှတ်၍ခေါင်းထောင်ပြီး ဝင်းနွယ်၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်သည်။ အတန်ငယ်ကားထား သော ပေါင်တံကြီးများ၏ ဂွဆုံမှ ဝင်းနွယ်၏ အမွှေးထူထူဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ စောစောက သူမတွေ့လိုက်ရသည်ထက်ပို၍ သိသိသာသာကြီး ဖောင်းမို့နေကြောင်း သတိထားမိလိုက်သည်။
သီသီခိုင် ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ဝင်းနွယ်.နင် ကုတင်ကို ကန့်လန့်ဖြတ် အိပ်လိုက်. ဝင်းနွယ် သဘောပေါက်သွားသည်။ သီသီခိုင် ကုတင်အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး စောက်ဖုတ် ယက်ပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ပြီး သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွေ့ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်အိပ်၍ ခြေနှစ် ချောင်းကို ကုတင်စောင်းသို့ တွဲလောင်းချလိုက်သည်။ သီသီခိုင်က ဝင်းနွယ်၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး သူမ၏ ပေါင်ကြားသို့ဝင်၍ ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ ကုတင်မှာ ဆိုဖာကုတင်ခေါ် ကုတင်အနိမ့်စား ဖြစ်၍ သီသီခိုင်၏ မျက်နှာနှင့် ဝင်းနွယ်၏ စောက်ဖုတ်တို့မှာ အံကိုက်အနေအထားဖြစ်သွားသည်။ အမွှေးထူထူနှင့် ဝင်းနွယ်၏ စောက်ဖုတ်ပေါ်သို့ သီသီခိုင်က လက်ဖဝါးလေးတင်၍ ပွတ်လိုက်သည်။
အင်း..ဟင်း..နင်ကလဲဟာ.. ဝင်းနွယ် တွန့်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ ပြီးတော့မှ သီသီခိုင်က စောက်ဖုတ်ပေါ်ရှိ စောက်မွှေးထူထူတို့ကို ဘေးနှင့် အထက်သို့ သပ်၍တင်လိုက်ရာ နီညိုရောင် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးက ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ အကွဲကြောင်းထဲမှ ခေါင်းပြူ၍ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်ပေါ်နေသော စောက်စေ့လေးမှာ မြင်ရရုံနှင့် အသဲယားစရာ ကောင်းလှသည်။ သီသီခိုင် လျှာကိုထုတ်၍ စောက်စေ့လေးကို ယက်လိုက်သည်။ အမေ့.အိုး..အိုး..အင်း.ဟင်း.. ဝင်းနွယ်၏ ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး တုန်သွားပြီး ကော့တက်လာသည်။ သီသီခိုင်မှာ စိတ်တွေဘလောင်ဆူ၍လာပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်မနှစ်ဖက်နှင့် အတန်ငယ်ဖြဲလိုက်ပြီး စောက်ခေါင်းဝသို့ လျှာကို စုချွန်၍ ထိုးသွင်းကာ ပီပီပြင်ပြင်ယက်လေတော့သည်။ အား.အင်း..အိုး..အား..အ.ဟင်း.ဟင်း.ဟုတ်တယ်.ယက်.ယက်.အိုး..အိုး..အင်း.. အင်း.အ.အ.အင်း..
ပုဇွန်တောင်ဈေးဖက်သို့ ခရီးသည်လိုက်ပို့ရင်း ဝေမိုးမှာ အပြန်တွင် နန်းရီဝင်းများ အိမ်တွင်ရှိမလားဟူသော အတွေးဖြင့် သူ၏ ကားအုံနာလည်းဖြစ်၊ သူမကြာခဏ လိုးနေရသော နန်းရီဝင်းတို့ အိမ်ဖက်သို့ ကားကိုမောင်းလာခဲ့သည်။ ခြံ ရှေ့ရောက်တော့ ခြံတံခါးလည်း ဖွင့်ထားသည့်အပြင် အိမ်ရှေ့တံခါးကြီးလည်းဖွင့်ထားသည်ကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် ကားကို လမ်းဘေးသို့ချ၍ ရပ်လိုက်ပြီး ဝေမိုး ခြံထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆင်သင့်ဖွင့်ထားသော အိမ်တံခါးမှ အထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် မည်သူ့ကိုမှ မတွေ့ရဘဲ တစ်အိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်၍ နေသည်။ ဝေမိုး ပြုံးလိုက်သည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ သည်လိုပင် မမနန်းက သူ့ကားအိမ်ရှေ့သို့ရပ်လိုက်သည်နှင့် သူမက အိပ်ခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်သွားပြီး အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ကာ ဝတ်လစ်စလစ်နှင့် ကုတင်ပေါ်တွင် လှဲ၍ အလိုးခံရန် စောင့်နေတတ်လေသည်။ ဝေမိုး အတွင်းဖက်ရှိ အိပ်ခန်းရှိရာသို့ တဖြေးဖြေး လျှောက်လာခဲ့သည်။ မမနန်း၏ အိပ်ခန်းက ပိတ်ထားပြီး သူမ၏ သမီး နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ အိပ်ခန်းက ပွင့်၍ နေသည်။ ဝေမိုး ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲ ပွင့်နေသော အိပ်ခန်းဝသို့ လျှောက်လာ ခဲ့သည်။
ဟင်. ဝေမိုး ကိုယ်ရှိန်သပ်လိုက်ပြီး တံခါးပေါက်ဘေးသို့ အသာပြေးကပ်လိုက်ရသည်။ အိပ်ခန်းထဲတွင် နန်းဝင်းဝင်းနွယ် နှင့် သူမ၏ သူငယ်ချင်း သီသီခိုင်ဆိုသော ကောင်မလေးတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် ပလူးနေကြသည်။ ကောင် မလေးနှစ်ယောက်စလုံးကို သူရင်းရင်းနှီးနှီး သိသလို ကောင်မလေးတွေကလည်း သူ့ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး သိလေသည်။ တံခါး ပေါက်ဘေးမှာ ရပ်၍ မျက်နှာတစ်ခြမ်းထုတ်၍ အထဲသို့ ကြည့်နေမိလေသည်။ အိုး.ဟင့်.ဟင့်..မိသီရယ်.အားပါးရှီးကောင်းလိုက်တာ..ကောင်းလိုက်တာ..နာနာဖိယက်စမ်းပါ. .အမလေး.လေး.အားပါးရှီး. သီသီခိုင်က ဝင်းနွယ်၏ စောက်ဖုတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကျကျနနဆွဲဖြဲပြီး လျှာနဲ့ ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ မြည်အောင် ကို အားရပါးရ ကုန်းကုန်းယက်ပေးနေသည်။ လျှာကို အပြားလိုက်ကပ်ပြီး ကျကျနန ယက်ပေးနေတာဖြစ်သည်။
အား.ဟား.ဟား.ဟုတ်ပီပင့်ပင့်ပြီး ယက်တင်ပေးလေ.အကွဲကြောင်းမှာချည်း ယက်မနေနဲ့.နှုတ်ခမ်း သားတွေကို ယက်ပေး.အစေ့ကိုလည်း ချန်မထားနဲ့လေ.အားဟုတ်ပီ..အမလေး.လေး.ခံရတာ ထိလိုက်တာ.. တကယ်ပဲ.အိုး.အိုး.အား.ထိုးထည့်လေ.အပေါက်ကို လျှာထိုးသွင်းပါတော့လား.အ.အီး.အိုး.အိုးဟင်း ဟင်း.. ဝင်းနွယ်တစ်ယောက် ကော့လန်ပြန်ပြီး ရမက်ပြင်းပြင်း အာသာငမ်းငမ်းဖြစ်နေသည်။ ပေါင်ကြီးတွေကို ဆွဲထောင်လိုက် ဝင်းနွယ်. နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က ကုတင်စောင်းတွင် တွဲလောင်းချထားသော ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲတင် မယူလိုက်ပြီး ဒူးနှစ်ဖက် ကိုကွေးကာ ပေါင်နှစ်လုံးကို ထောင်၍ကားလိုက်ပြီး ခြေဖနောင့်လေးနှင့် ကုတင်စောင်းအစပ်လေးကို နင်းထားလိုက်သည်။ သီသီခိုင်၏ ပါးစပ်က ရှေ့သို့တိုးကပ်လိုက်ပြီး ရမက်တွေပြင်းထန်မှုကြောင့် အတော်ထောင်တက်နေသော ဝင်းနွယ်၏ စောက် စေ့လေးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနှင့် ညှပ်၍ စုပ်လိုက်သည်။
အ.အ.ရှီး.အိုး.အား..ငါ.ပြီး.ပြီးတော့မယ်.စုပ်.စုပ်.အား.အား.အိုး.အား.ရှီး.အား .အား. ဝင်းနွယ်၏ ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ယမ်းခါ၍ ပြီးသွားသည်။ ဝင်းနွယ် ငြိမ်ကျသွားသည်အထိ သီသီခိုင်က စောက် စေ့လေးကို ဆက်၍ မြှင်းမြှင်းလေးစုပ်ပေးနေပြီးမှ သူမ၏ ပါးစပ်ကိုခွာ၍ မတ်တတ်ထ၍ ရပ်လိုက်သည်။ ကောင်းလိုက်တာ မိသီရယ်.လာ.နင့်ကို ငါ တလှည့် ယက်ပေးမယ် ဝင်းနွယ်က ပြောပြီးထထိုင်ကာ ကုတင်ပေါ်မှဆင်း၍ မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီး သီသီခိုင်နှင့် နေရာချင်း လဲရန်ပြင် လိုက်သည်။ ဟင်.ဟို.ဟိုမှာ. ဝင်းနွယ် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးနှင့် တံခါးပေါက်ဖက် လက်ညှိုးထိုးပြီး ကြောက်အားလန့်အားပြောသည်။ သီသီခိုင် တံခါးပေါက်ဖက်သို့ လှည့်ကြည့်သည်။
ဟင်. ဝုန်းဂျိုင်း. တံခါးဝတွင် မားမားကြီးရပ်နေသော ဝေမိုးကို တွေ့လိုက်ရပြီး သီသီခိုင်မှာ လက်မြန်ခြေမြန်ဖြင့် အိပ်ခန်းတံခါးပေါက် ကို ပြေးပိတ်လိုက်လေသည်။ အိပ်ခန်းတံခါး ဝုန်းကနဲပိတ်သွားသည်နှင့် ဝေမိုးမှာ ခေါင်းကိုသွင်သွင်ခါယမ်းလိုက်ပြီး ထောင်ထနေသော သူ့လီး ကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှအုပ်ကိုင်ကာ ခဏကြာအောင် ပွတ်သပ်လိုက်ပြီးတော့မှ အိမ်ထဲမှ ပြန်ထွက်ကာ ကားပေါ်တက်၍ မောင်း ထွက်ခဲ့လေသည်။ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်တလှည့်ဆက်ပြီး ပလူးနေကြမှာ သေချာသည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်မှာ သူမ၏ မိခင် နန်းရီဝင်းထက်ပင် ပို၍နှာထန်သေးကြောင်း ဝေမိုး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ မြင်လာခဲ့ရ သည်။ လှတာ၊ ချောတာ၊ စွဲမက်စရာကောင်းတာကလည်း သူ့အမေ နန်းရီဝင်းထက် အများကြီး သာလေသည်။ ဝင်းနွယ်၏ ပုံရိပ်က ဝေမိုး၏ အာရုံထဲက မထွက်ချေ။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်မှာ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် ကုတင်စောင်းတွင် ကုတင်ပေါ်ကန့်လန့် ဖြတ်ကာ ပက်လက်လှန်လှဲနေသဖြင့် သူမ၏ ရင်သားစိုင်တွေက အထင်းသားဖြစ်နေသည်။ နို့တွေက အိကျ၍မနေဘဲ မို့ဝင်း တင်းရင်း၍နေသည်။ မို့မို့လုံးလုံးလေးတွေဖြစ်နေသည်။
ဝင်းနွယ်မှာ ရမက်တွေထန်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကော့ပျံကာဖြစ်နေသောကြောင့် သူမ၏ ရင်သားစိုင်နှစ်ခုက တသိမ့် သိမ့်တုန်ပြီးနေသည်။ နို့သီးခေါင်းလေး နှစ်ခုကလည်း ကော့ထောင်စူကြွ၍နေသည်။ သူမ၏ နို့သီးခေါင်းမှာ သာမန်မိန်းမတွေ ထက်ပိုပြီး ရှည်ကာ ထိပ်ဖျားလေးတွေက ချွန်၍နေသည်။ ဝမ်းဗိုက်သားက ရှပ်ရှပ်လေး၊ ဆီးစပ်က မို့မောက်နေပြီး စောက်မွှေး တွေက ထူလှသန်လှသည်။ ဖင်ကြီးက ဖွေးကာအိနေပြီး ပေါင်တံတုတ်တုတ်ကြီးတွေက ဖြူဖွေး၍နေသည်။ ဝေမိုးမှာ ဝင်းနွယ် ကို ပြန်၍မြင်ယောင်ရင်း သက်ပြင်းအခါခါချနေမိသည်။ သူနေ့စဉ် ဝင်ထွက်နေသောအိမ်မို့ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်နှင့် နီးစပ်ဖို့မှာ သိပ်ပြီးမခက်လှပေ။ ဒါပေမယ့် သူမ၏မိခင် နန်းရီဝင်း မသိအောင်တော့ လုပ်ဖို့လိုသည်။ ဒါဆိုရင် မအေရော၊ သမီးပါ ရေရှည် စားရတော့မည်ဟု ဝေမိုး တွေးမိလိုက်လေသည်။ ဝေမိုးက ကားကို ပုဇွန်တောင်ဈေးရှေ့တွင် အမြဲတမ်းဂိတ်ထိုးထားတတ်လေသည်။ ယခုလည်း ဝေမိုးမှာ ကားကို ဂိတ်ထိုးထားပြီး ခရီးသည်ကိုစောင့်ရင်း သတင်းစာကို ဖတ်၍နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မွေးပျံ့သောရနံ့ကို ရှုရှိုက်မိလိုက်သဖြင့် ဝေမိုးမှာ သတင်းစာမှ မျက်နှာကိုခွာလိုက်သည်။ ထိုအခိုက်မှာပင် ကားဘေးတွင်ကပ်၍ရပ်နေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက် ၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ခြေထောက်အစုံကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ ဝေမိုး ကောင်မလေး၏ မျက်နှာကိုမော့၍ကြည့်လိုက်ရာ သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေသော မျက်လုံးတစ်စုံနှင့် ရင်ဆိုင်မိလိုက်သည်။
ဟင်..ဝင်းနွယ် ဝေမိုး ရင်ထဲ ဒိတ်ကနဲခုန်သွားသည်။ ဝေမိုး အံ့အားသင့်သွားသည်ကို ကြည့်ပြီး နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ မျက်နှာလေးပြုံးယောင်သမ်းသွားသည်။ ဦးမိုး.သမီးကို အိမ်လိုက်ပို့ပေးပါလား အင်း.တက် ဝင်းနွယ် ခေါင်းကိုပတ်၍လျှောက်သွားပြီး ကားခေါင်းခန်းတံခါးကိုဖွင့်၍ ဝေမိုးနှင့်ယှဉ်ထိုင်လိုက်သည်။ ကားကို သာ ဂရုစိုက်ပြီး မောင်းလာရပေမယ့် ဝေမိုး ရင်တွေက တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသလို သူ့အကြည့်တွေကလည်း သူ၏ဘေးတွင် ယှဉ်ထိုင်နေသော ဝင်းနွယ်ထံသို့ ရောက် ရောက်သွားရသည်။ ဝင်းနွယ်ဝတ်ထားသော စကပ်တိုတိုလေးက ပေါင်လည် လောက်သာရှိ၍ ဖြူဖွေးဝင်းအိနေသော ပေါင်တံတုတ်တုတ်ကြီးတွေက စွဲမက်စရာကောင်းအောင် ပေါ်လွင်၍နေသည်။ ဝင်းနွယ်မှာ နှုတ်ခမ်းလေးကို တင်းတင်းလေးစေ့၍ စူးရှဝိုင်းစက်သော သူမ၏ မျက်လုံးအစုံက ရှေ့တူရှုသို့ကြည့်နေသည်။ ဝင်းနွယ်၏ ပုံစံမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံရသည်။
နန်းဝင်းဝင်းနွယ်တို့အိမ်မှာ အေဘီစီတွင်ဆိုတော့ ကားက ခဏလေးမောင်းရသည်။ ခြံရှေ့ရောက်တော့ ဝေမိုး ကား ကိုရပ်လိုက်သည်။ ဦးမိုး.အိမ်ထဲဝင်အုံး အသံပြတ်နှင့်ဆိုပေမယ့် အမိန့်ပေးသံမပေါက်။ ဝင်းနွယ်၏ အသံလေးက နုနုလေး။ ဝေမိုးရင်ထဲ တဒိန်းဒိန်းဖြစ်သွား သည်။ ကားထဲမှ ထွက်၍ ဝင်းနွယ်နောက်သို့ လိုက်လာခဲ့သည်။ တင်းတင်းရင်းရင်းလေးဝတ်ထားသော စကပ်လေးအတွင်းမှ တင်သားစိုင်ကြီးတွေက တအိအိတုန်ခါ၍နေသည်။ ဝေမိုး သက်ပြင်းအခါခါချရင်း ဝင်းနွယ်၏ နောက်ဖက်မှ လိုက်လာကာ အိမ်ထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်။ ဦးမိုး ခဏထိုင်ဦးနော် ဝေမိုးကို လှည့်မကြည့်ဘဲ ဝင်းနွယ်ကပြောကာ အိမ်အတွင်းဖက်သို့ တောက်လျှောက်ဝင်သွားသည်။ ဝေမိုး အိမ်ရှေ့ ခန်းမှ ကုလားထိုင်တွင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်။ ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဝင်းနွယ် အိမ်အတွင်းဖက်မှ ပြန်၍ထွက်လာသည်။ စောစောက အဝတ်အစားနှင့် မဟုတ်တော့ဘဲ ထဘီလေးတစ်ထည်ကိုသာ ရင်လျားဝတ်ထားသည်။ ဖြူဖြူဝင်းဝင်းအသား အရည်လေးနှင့် တစ်တစ်ရစ်ရစ်လှပသော ဝင်းနွယ်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း ဝေမိုး ကြက်သေ သေသွားသည်။ ဝင်းနွယ် သူထိုင်နေ သော နေရာရှေ့တွင် ခြေစုံလာရပ်သည်။
ဦးမိုးကို သမီးတစ်ခုပြောမလို့ ဝင်းနွယ်၏ မျက်နှာလေးကို သူကြည့်လိုက်သည်။ ပြောလေ ဦးမိုး လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မတရားဘူး ဟင်..ဦး.ဘာ. နေ.နေအုံး..သမီး စကားမဆုံးသေးဘူး ဝင်းနွယ်က သူ့ကိုလက်ကာပြီးပြောသည်။ ပြီးတော့ စကားကိုဆက်၍ မပြောဘဲ ခပ်တွေတွေလေးရပ်ကာ ဝေမိုးကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ဝင်းနွယ် ပြောရမှာ ခက်နေပုံရသည်။ ပြောမထွက်ပုံလည်းရသည်။ ဦးကို အားမနာပါနဲ့ ပြောစရာရှိတာ ပြောပါ.. ဒီတော့မှ ဝင်းနွယ် သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီး ဆက်ပြောသည်။ ဦးမိုးကို သမီးမေးမယ်.အဲဒါကို အမှန်အတိုင်းဖြေ. အင်း. လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို လူမမြင်အောင်သိမ်းထားတာကို ခိုးပြီးကြည့်တာ တရားပါ့မလား. .. ဘယ်တရားပါ့မလဲ.ဒါက ဦး.. နေအုံး သမီးဆက်ပြောအုံးမယ်.အဲဒီလို သူများ ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်မသိအောင်ခိုးကြည့်ပြီး သူ့ပစ္စည်းကျတော့ လူမြင်မှာစိုးလို့ သိမ်းဆည်းထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူ တရားပါ့မလား. ဘယ်တရားပါ့မလဲ.
ဝင်းနွယ်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်း ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ အိမ်အတွင်းဖက်သို့ လှည့်ထွက်ရန် ပြင်လိုက်သည်။ ဦးမိုး မတရားဘူး ဟင်. ဝင်းနွယ် အိမ်အတွင်းဖက်သို့ ဝင်သွားချေပြီ။ ဝေမိုး ချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပေမယ့် ခဏကြောင်နေပြီးမှ ဝင်းနွယ်၏နောက်သို့ ဝင်၍လိုက်ခဲ့လေသည်။ ဝေမိုး အခန်းဝရောက်သောအခါ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်မှာ အိပ်ခန်းထဲရှိ ပြတင်း ပေါက် တစ်ခုရှေ့တွင် အိမ်ခန်းထဲသို့ ကျောပေး၍ ရပ်နေသည်။ ဝေမိုး အိပ်ခန်းထဲသို့ ဖြေးညှင်းစွာလျှောက်ဝင်လာပြီး ကုတင် ဘေးတွင်ရပ်၍ ဝင်းနွယ်၏နောက်ကျောအလှကိုကြည့်၍ ခံစားနေမိသည်။ ဝင်းနွယ်နှင့်က တစ်လံအကွာလောက်သာ ကွာခြား တော့သည်။ ဝင်းနွယ်၏ အသက်ရှုသံတွေက ပြင်းထန်ပြီး မြန်ဆန်၍နေသည်။ အသက်ပြင်းပြင်းရှုနေသောကြောင့် ရင်လျားထားသော ထဘီအတွင်းမှ မလုံတလုံ ရင်သားဆိုင်ကြီးများမှာ ကြွတက်လာလိုက်၊ နိမ့်ဆင်းသွားလိုက်နှင့် ဖြစ်နေသည်။
ဝေမိုး သူ၏ ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ်၍ကုတင်တန်းပေါ်တင်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ပုဆိုးနှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီတို့ကို ကွင်း လုံးချွတ်ချလိုက်ရာ ဝင်းနွယ်နှင့်အတူ ကားပေါ်တွင်ရှိကတည်းက ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးက ဖြောင်းကနဲ ထွက်၍လာသည်။ ဝေမိုး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားပြီ။ အရှည် (၇)လက်မနှင့် လုံးပတ် (၄)လက်မခွဲလောက်ရှိသော သူ့လီးကြီး ကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဝင်းနွယ်ကို ကြည့်လိုက်ပြီး တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက် လီးကို လက်ဖြင့် ဆုပ်ညှစ်လိုက်ပြီး ရှေ့မှကုတင် ပေါ်သို့ ပကျလကျလှဲခလြိုကျတော့သညျ။ တပြိုင်နက်တည်းမှာလိုပင် ဝင်းနွယ်တစ်ယောက် ကုတင်ဘေးသို့ရောက်၍လာ သည်။ ထောင်မတ်နေသော ဝေမိုး၏လီးကြီးကို မမှိတ်မသုန်ကြည့်ရင်း သူမကိုယ်ပေါ်မှ ရင်လျားထားသော ထဘီကို ကွင်းလုံး ချွတ်ချလိုက်သည်။
ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသော ဝင်းနွယ်က သူမ၏လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဝေမိုး၏လီးတန်ကြီးကို လှမ်း၍ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ကုတင်စောင်းတွင်ဝင်၍ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ကျန်သောလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဝေမိုး၏ ဂွေးအုကြီးများကို အရသာခံ၍ကိုင် ကြည့်သည်။ ဝေမိုးက သူမ၏တင်သားကြီးတွေကို လှမ်း၍ကိုင်လိုက်သည်။ တင်သားကြီးများမှာ တင်း၍လုံးကျစ်နေသည်။ ပြီး တော့မှ ဝင်းနွယ်က ဝေမိုး၏ဘေးသို့လှဲချလိုက်ရာ ဝေမိုးက သူမကိုဖက်၍ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဝင်းနွယ် က သူမ၏ပါးစပ်လေးကို အသာလေး ဟပေးပြီး သူမ၏လျှာလေးကို ဝေမိုး၏ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းပေးရာ ဝေမိုးမှာ ဝင်းနွယ်၏ လျှာလေးကို မက်မက်မောမောစုပ်ယူနေမိသည်။ အိပ်ခန်းထဲရောက်မှ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ကြချေ။
ဝင်းနွယ်၏ လက်တစ်ဖက်ကတော့ လီးပေါ်မှ မခွာပေ။ လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပွတ်သပ်ပေး နေသည်။ ထိုနည်းတူပင် ဝေမိုး၏လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဝင်းနွယ်၏ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးပေါ်အုပ်၍ကိုင်ကာ အမွှေး ရှည်ရှည်လေးများကို သပ်၍တင်ပေးရင်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုကို ပွတ်၍ပေးသည်။ ထိုအခါ လက်ဖဝါးထဲ၌ ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေသော စောက်စေ့လေးကို လောက်စာလုံး လုံးသလို လက်ဖဝါးထဲထည့်၍ လှိမ့်ပေးသည်။ အို.ဟင့်..ဟင့်..ဦး..အင့်..ဟင့်..ဦး..ကျမနို့တွေ စို့ပေးစမ်းပါလား.ဟင့်.အင့်..ဟင်း. ဝင်းနွယ်ပြောပြီးသည်နှင့် ဝေမိုးက ဝင်းနွယ်၏ နို့တစ်ဖက်ကို ပါးစပ်ဖြင့်ငုံလိုက်သည်။ ပါးစပ်ထဲရောက်လာသော နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ထိုးဖိပွတ်ပေးရင်း နို့သီးခေါင်းအခြေကိုတော့ သွားနဲ့မနာအောင် ကိုက်ပေးသည်။ သူ၏လွတ်နေ သော လက်တစ်ဖက်က ဝင်းနွယ်၏ စောက်ဖုတ်ကိုလှမ်း၍ ကိုင်လိုက်ပြန်သည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်က အလိုက်တသိပင် သူမ၏ ပေါင်တန်ကြီးများကို ကား၍ပေးသည်။ လက်ဖဝါးဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်လိုက်တော့ ကောင်မလေး ကော့ ၍တက်လာသည်။
ရမ္မက်စိတ်ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖောင်းကားနေတာဆိုတော့ လက်ထဲမှာ စောက်ဖုတ်ကြီးက တလုံးတခဲ အိအိထွေးထွေးကြီးဖြစ်၍နေသည်။ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် ပွတ်စမ်းကြည့်လိုက်တော့ စောက်ရည်ကြည်တွေ က ဝက်ဝက်ကွဲစိုရွှဲ၍နေသည်။ ဝေမိုး မကြုံဖူးလောက်အောင်ပင် စောက်ရည်ကြည်တွေက များပြားစိုစွတ်၍နေသည်။ ဝင်းနွယ်တစ်ယောက် အတော်ဏှာထန်တာဘဲဟု တွေးမိလိုက်ရုံမက သူမ၏ မိခင်ထက်ပင် ပို၍ထန်ကြောင်း သတိပြုမိလိုက် သည်။ ဝေမိုး နို့စို့ပေးနေတာကို ရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ထထိုင်လိုက်လျှင် ပက်လက်လေးဖြစ်နေသော ဝင်းနွယ်က သူမ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဒူးကွေး၍ထောင်လိုက်ပြီး ကားပေးလိုက်သည်။ ဝေမိုးတက်လိုး၍ရအောင် အဆင်သင့်ပြင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အသင့်ပြင်ပေးထားသော ဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်နေဟန်ထားလေးမှာ ရမက်ကြွစရာကောင်းလွန်းလှသည်။ ဝေမိုး သူမ၏ ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်လိုက်ပြီး လီးကိုလက်နှင့်ကိုင်၍ စောက်ပတ်ဝကိုမှန်း၍ လီးထိပ်ဖြင့်တေ့ထောက်လိုက် သည်။
အို.အဟင့်.ဦး. စောက်ရည်ကြည်များ မတရားစိုရွှဲနေမှုကြောင့် လီးထိပ်က နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုကြားသို့ နှီးတပြားခန့် နစ်ဝင်သွား သည်။ ထိုအခိုက် ဝင်းနွယ်ကလည်း သူမ၏ ဖင်ကြီးကို အလိုက်သင့်ကော့တင်ပေးခိုက်နှင့် အံကိုက်သွားပြီးအထဲသို့ လီးတန် ကြီး တဝက်လောက်ဝင်၍ သွားလေသည်။ ချွဲကျိကျိအတွေ့နဲ့ တင်းကြပ်ကြပ်အတွေ့တို့နှစ်ရပ်ပေါင်း၍ လီးတန်ကြီးက ခံစား လိုက်ရသည်။ ဝေမိုးက ကျန်နေသောလီးတဝက်ကို ထပ်၍ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ဗြစ်.ဗြစ်.ဖွတ် အား.ကျွတ်.ကျွတ်.ဖြေးဖြေးဦးရယ်..ဖြေးဖြေး..အား.အား. နန်းဝင်းဝင်းနွယ်ဆိုသော ကောင်မလေး၏ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ပြီး ငြီးရှာသည်။ ဝေမိုး၏ လီးရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီးက စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တဆုံးဝင်၍သွားသည်။ ဝင်သွားပြီ.အဟင့်.ဝင်သွားပြီ သိပ်နာနေလား သမီး ဟုတ်တယ် ဦးရာ.တော်တော်နာတယ်.ဦးဟာကြီးက အရမ်းကြီးတာကိုး. နာတယ်ဆိုရင် လီးပြန်ထုတ်လိုက်မယ်လေ အပိုတွေ လာပြောမနေနဲ့.အနာခံပြီးမှတော့ ပြန်မထုတ်နဲ့တော့. ဒါဆိုရင် ဆက်ပြီးလိုးမယ်နော် အင်း.လိုးလေ.သိပ်တော့မကြမ်းနဲ့နော် ဦး ဝေမိုးက စောက်ဖုတ်ထဲကလီးကို ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေး လိုးပေးသည်။ ကြီးမား တုတ်ခိုင်လှသည့် ဝေမိုး၏လီးနှင့် ကျဉ်းကြပ်လှသော ဝင်းနွယ်၏စောက်ဖုတ်တို့မှာ အံကျသွားစေရန် အစပျိုး၍ ကျင့်ယူနေ ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ရမက်ထန်သော နန်းဝင်းဝင်းနွယ်ကလည်း သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကော့ ကော့တင်ပေးသည်။
ဝေမိုး က ကျဉ်းကြပ်လှသော ဝင်းနွယ်၏စောက်ဖုတ်မှာ သူ၏လီးကြီးနှင့် ကျင့်သားရလာပြီဆိုသည်ကို သတိထားမိလိုက်ပြီး တဆင့် တက်၍ခပ်မှန်မှန် တစ်ချက်ချင်းဆောင့် ဆောင့်လိုးပေးသည်။ ဖွတ်.စွပ်.ဖွတ်စွပ်.ဖွတ် အင့်.ဟင့်..ကောင်းတယ်ဦးရာ..ဆောင့်.ဆောင့်.လေ. ဖွတ်.ဖွတ်.ပြွတ်.ဗြစ်ဗြစ်.ဆောင့်ဆောင့်.ပိုပြီး ပြင်းပြင်း ဆောင့်.အား.အား..ထွက်ကုန်ပြီ. အား.အား. အချက်သုံးဆယ်လောက်ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးပေးလိုက်သောအခါ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်သည် ငါးဖယ်ပျံသလို ကော့ ကော့တက်ပြီး ပြီး သွားသည်။ ဝေမိုးက မပြီးသေးပေ။ ဆောင့်တာရပ်လိုက်ပြီး လီးကို အဖုတ်ထဲဖိထည့်ပြီး စိမ်ပေးထားလိုက်သည်။ နန်းဝင်းဝင်းနွယ်၏ ကိုယ်လုံးလေး ငြိမ်ကျသွားတော့မှ အဖုတ်ထဲမှ လီးကြီးအား ဝေမိုးက ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ကဲ ဝင်းနွယ်..လေးဖက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးစမ်းဟာ.နင့် ဖင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး ငါလိုးချင်လို့.. ဝေမိုး တမင်တစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်တာဖြစ်သည်။ ကြားလိုက်ရသော ဝင်းနွယ်မှာ ချက်ချင်းစိတ်တွေလှုပ်ရှား၍သွား သည်။ ပြီးတော့ အိပ်ယာပေါ်တွင် ထထိုင်ပြီး လေးဖက်ထောက်၍ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဝေမိုးက သူမ၏နောက်တွင် နေရာယူ၍ သူမ၏ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကို ကျကျနနဖြဲကာ လီးကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့ပြီး ဖိ၍ထိုးသွင်းသည်။
အား.ကျွတ်..ကျွတ်.ရှီး. ဝင်းနွယ် ဆတ်ကနဲ တုန်သွားပြီး စုပ်သပ်၍ ညီးလိုက်သည်။ ဝေမိုးက သူမ၏ခါးသေးသေးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ကိုင်ထားပြီး ဒစ်မြုပ်နေပြီဖြစ်သော သူ၏လီးကြီးကို ဆက်ပြီး လိုးသွင်းနေသည်။ တအားဖိပြီး သွင်းတာမျိုးမဟုတ်။ တထစ်ချင်း သွင်းနေတာဖြစ်သည်။ အ.အမလေး.လေး.ဦးရယ်.အား ပါးပါး.ဟင့်.ဝင်လာတယ်.ဦးရဲ့ လီးကြီး ကျမအဖုတ်ထဲကို.ဝင်.. ဝင်.တယ်.အား.အား..ဖြေး..ဖြေး မကြမ်းပါနဲ့..ဖြေးဖြေး. နောက်ဆုံး လီးက တစ်ချောင်းလုံးဝင်၍သွားသည်။ ဝင်နေသော လီးကိုငြိမ်ထားပြီး ဝေမိုးက ဝင်းနွယ်၏ဖင်သားကြီး နှစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အရသာခံ၍ကိုင်ကာ ဆုပ်နယ်၍ပေးသည်။ ဝင်းနွယ်၏စိတ်တွေ အတော်ကြီး ထ၍လာသည်။ လုပ်တော့လေ ဦးရာ.လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်နေပြီပဲဟာ.ဘာလုပ်နေတာလဲလို့.ဟင့်..ဟင့်.ဟင့်. နန်းဝင်းဝင်းနွယ် လီးတစ်လစ်ကြီးဝင်နေသော သူမ၏ဖင်ကြီးကို လှုပ်၍ လှုပ်၍ လေးဖက်ကုန်းနေရာမှ ပြောရှာသည်။ ဝေမိုးက သဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီး ဝင်းနွယ်၏ ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကျကျနနကိုင်ပြီး လီးကြီးကို ဖြေး ဖြေးလေးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်သည်။ တကယ့်မှ ဖြေးဖြေးလေးဖြစ်သည်။
ကျဉ်းကြပ်လှသောစောက်ဖုတ်ထဲကို တုတ် ခိုင်ကြီးမားလှတဲ့ လီးက ဝင်နေတာဆိုတော့ ကြပ်ညပ်နေသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသား နှုတ်ခမ်းသားများက လီးကြီး ဆွဲ ထုတ်လိုက်တိုင်း စူ စူ၍ထွက်လာသည်။ ဝေမိုး၏ လိုးဆောင့်ချက်တွေက တဖြေးဖြေး သွက်သွက်လာသလို အားလည်းပြင်း လာသည်။ စွပ်.ဖွတ်.ဖွတ်.ပြွတ်.ဗြစ်ဖွတ်.ဖွတ်. အား.ဟား..ဆောင့်..ဆောင့်..တအားဆောင့်..အင်း.အား..အား.. ဝင်းနွယ်၏သွေးသားတွေ အရမ်းပင်လှုပ်ရှား၍လာသည်။ ပါးစပ်က အငမ်းမရပြောရင်း သူမ၏ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ ကော့တင်ပေးသည်။ ဝင်းနွယ်မှာ လေးဖက်ထောက်လျက်ပုံစံပင်မဟုတ်တော့ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို အိပ်ယာပေါ်တွင် ပြားနေအောင်ကပ်ပြီး ဝပ်ပေးထားကာ ဖင်ပူးတောင်းထောင်၍ အလိုးခံနေသည့်အနေအထားသို့ ရောက်၍နေသည်။
ဖွတ်.ဖွတ်.စွပ်.စွပ်.ပြွတ်.အား.ပါး.အား.အား.အိုး.အိုး..အမလေး.လေး.ကျွတ် ကျွတ်..ကျွတ်. နန်းဝင်းဝင်းနွယ် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ အရည်တွေကို ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ဝင်းနွယ် ပြီးသွားမှန်းသိပေမယ့် ဝေမိုးက အလိုးအဆောင့်မရပ်တော့ပါ။ လှုပ်ရှားသွားသော သူမ၏ ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ကာ ဖိ၍ ဖိ၍ ဆောင့်ကာလိုးသည်။ ဖွတ်.ဖွတ်.ပြွတ်..ပြွတ်.စွပ်.ဖွတ်.ဗြစ်.ဗြစ်.ဖွတ်.အားအအီးရှီးအအမလေး.အိုး. အိုး. ပြီးသွားပြီးနောက် ကျိန်းစပ်နေသော စောက်ခေါင်းထဲသို့ ခပ်ထွားထွားတုတ်တုတ်ကြီးက အားရပါးရဆက်ပြီး ဆောင့် လိုးနေသည်ဖြစ်၍ ဝင်းနွယ်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲတွင် ကျိန်းစပ်ပြီး နာလှသည်။ ဒါပေမယ့် အချက်(၂၀)လောက်ဆက်ပြီး ဆောင့် ပြီးချိန်တွင်တော့ အရသာကောင်း၍လာပြီး သူမ၏သွေးသားများပြန်၍ ဆူပွက်လာသည်။ ဖွတ်.ဖွတ်.စွပ်.စွပ်.ပြွတ်.အီး.ဆောင့်.ဦး.သမီး ကောင်းလာပြီ မညှာနဲ့.ဆောင့်.ဆောင့်.အိုး ..အိုး. တဖြေးဖြေးကောင်းလာသော ဝင်းနွယ်မှာ ပြီးလုပြီးချင်ဖြစ်လာသလို ပြီးချင်လာသော ဝေမိုးကလည်း ဒလစပ်ဆောင့် သည်။ ဝင်းနွယ်ပြောပြီး အချက်(၂၀)လောက် ဆောင့်ပြီးချိန်တွင်တော့ ဝေမိုး၏ လရည်များမှာ တပုံတပင်ကြီး အရှိန်ပြင်းပြင်း ဖြင့် ပန်းထွက်သွားရာ ပူပူနွေးနွေးသုတ်ရည်များ သားအိမ်ထဲသို့ အရှိန်ပြင်းစွာကျရောက်ခိုက် နန်းဝင်းဝင်းနွယ်မှာလည်း ဖင်ကြီးရမ်းခါ၍ ပြီး သွားတော့သည်။ ဖွတ်.ပြွတ်.စွပ်.ဖွတ်..ဗြစ်.ပြွတ်.ဗြစ်.ဖွတ်ဗြစ်အိုး.ဦး.အား.အား.ထွက်.ထွက်ပြီ. အား.အမလေး..ကောင်းလိုက်တာရှင်အ..အမလေး..ဘယ်လို ကောင်းမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး..အား အား. ပြီးပါပြီ။
Tags:လိုးတတျလိုကျတာ ဦးမိုးရယျနှငျ့နှာဘူးမလေး မိဝငျးနှယျတို့ အလိုးခံပှဲ